အနာဂတ်စွမ်းအင်အတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏အခန်းကဏ္aboutကိုသင်သိထားသင့်သမျှ - WorldRef
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ Grid များတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရောစပ်ခြင်း
မတ်လ 18th, 2021
Michel Noussan ဆိပ်ခံတံတား Paolo Raimondi Rossana Scita Manfred Hafner
Fondazione Eni Enrico Mattei, Corso Magenta 63, 20123 Milano, Italy
ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်နိုင်ငံအဆင့်နှင့်နိုင်ငံတကာရာသီဥတုဗျူဟာများတွင်အသစ်စက်စက်နှင့်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းသည်အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်သက်ဆိုင်သောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုဆန်းစစ်ခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်ပြီးအလားအလာရှိသောဟိုက်ဒရိုဂျင်လူ့ဘောင်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များ၏အခြေခံဖြစ်သည်။ အစိုးရများနှင့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရင်းအမြစ်များစွာထုတ်ပေးနေသော်လည်းနည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ၊ စီးပွားရေးနှင့်ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများအပါအ ၀ င်မဖြေရှင်းနိုင်သောပြissuesနာများစွာကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွင်အဆင့်များစွာပါ ၀ င်ပြီးနောက်ထပ်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုအဓိကထားထားသော်လည်း၎င်း၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်မှုများကိုလျစ်လျူရှုမထားသင့်ပါ။ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသောကာဗွန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေးသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်သာမကစွမ်းအင်လုံခြုံမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်နိုင်ငံများစွာရှိဒေသတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတိုးတက်ရန်အလားအလာရှိသောအခွင့်အလမ်းများကိုပေးသည် မည်သို့ပင်ဆိုစေကာဗွန်ကာဗွန်စွမ်းအင်စနစ်သို့ကူးပြောင်းခြင်း၏ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရန်ရရှိနိုင်သည့်နည်းပညာများကိုပွင့်လင်းမြင်သာသောစံနှုန်းများနှင့်ပစ်မှတ်များပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုလိုအပ်သောတိုင်းတာနိုင်သောညွှန်းကိန်းများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ပံ့ပိုးရန်ခွင့်ပြုသင့်သည်။
စွမ်းအင်စနစ်များသည်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်နည်းပညာများဆီသို့ကူးပြောင်းခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထိကဏ္ different အသီးသီးနှင့်သက်ဆိုင်စေရန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်နိုင်ငံအဆင့်နှင့်နိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာများတွင်အလားအလာရှိသောကစားသမားအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာသည်။ ရည်မှန်းထားသောဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာများနှင့်လမ်းပြမြေပုံများကိုကမ္ဘာ့စီးပွားရေးများဖြစ်သောဂျပန်၊ ၊ ဂျာမနီ ၊ သြစတြေးလျ  နှင့်ဥရောပသမဂ္ဂ  တို့မှတီထွင်နေကြသည်။ သုတေသနစီမံကိန်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသုံးချမှုများသည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးအသုံးပြုခြင်းတို့ပါဝင်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်း၏မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်သန့်စင်သောသန့်စင်စက်ရုံများမှအမိုးနီးယားနှင့်မက်သနောထုတ်လုပ်သည့်အထိအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုရန်ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဟိုက်ဒရိုဂျင်လိုအပ်မှုမှာ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင်တန် ၂၀ ထက်နည်းသောပမာဏမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၇၀ တန်အထိရှိခဲ့သည်။ သို့တိုင်လက်ရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်လိုအပ်မှုကိုသဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံနှင့်ကျောက်မီးသွေးတို့အပါအ ၀ င်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများမှအများဆုံးတင်ပို့သည်။ ယနေ့တွင်၎င်းတို့သည်ဈေးအပေါဆုံးလမ်းကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်ကျစရိတ်သည်တစ်ကီလိုလျှင် ၁ ဒေါ်လာမှ ၃ ဒေါ်လာအထိရှိသည်။
သို့သော်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်အဓိကအားဖြင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များ (RES) မှထုတ်လုပ်သောကာဗွန်နိမ့်စွမ်းအင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ကျက်မှုကိုထောက်ပံ့ရန်အလားအလာရှိသောစွမ်းအင်သယ်ဆောင်သူအဖြစ်အဆိုပြုထားသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်အားထက်သန်မှုလှိုင်းများသည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများအစားထိုးရွေးချယ်မှု၏အခြေခံတွင်တန်ဖိုးနည်းသန့်ရှင်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ဇာတ်ကြောင်းကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ in ရှိလောင်စာဆဲလ်များကိုအသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ကဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာ၏သိပ္ပံနှင့်စက်မှုအကျိုးစီးပွားကိုကွဲပြားသောအချိန်သုံးခုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည်ရေနံပြတ်လပ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည့်အခြားရွေးချယ်စရာအဖြေများရှာဖွေခြင်းနှင့်ဒေသတွင်းလေထုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အက်စစ်မိုးများကဲ့သို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြlingနာများကိုကိုင်တွယ်နေစဉ် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောရေနံအကျပ်အတည်းများအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနအစီအစဉ်များနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော်လည်းရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်များကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ရေနံစျေးနှုန်းကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်ရှားပါးမှုပြofနာများပျောက်ကွယ်သွားခြင်းများကြောင့်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရရှိခဲ့ပါ။ အခြားစိတ်အားထက်သန်မှုလှိုင်းနှစ်ခုသည် ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုပြoilနာများနှင့်ရေနံအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ တဖန်ရေနံစျေးနှုန်းနိမ့်သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာပျံ့နှံ့မှုကိုကန့်သတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များအကုန်တွင်စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္crisisာရေးအကျပ်အတည်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယနေ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏အလားအလာကိုပိုမိုအားကောင်းလာနေသောရာသီဥတုအစီအစဉ်ကြောင့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပစ်မှတ်များပိုမိုခိုင်မာလာသည်။ သန့်ရှင်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များဆီသို့ပြောင်းလဲမှုကိုသေချာစေရန်နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုများတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်နည်းပညာအုပ်စုတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ COVID-8 ရောဂါပြီးနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာကိုအမျိုးသားစက်မှုကဏ္ sectors ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်စဉ်းစားလျက်ရှိသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုအခြေခံတဲ့အစီအစဉ်ကိုကိုးကားခြင်းအားဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများပိုမိုတိုးပွားလာသည်။ [9, 10] ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသောအဓိကအရောင်များကိုအောက်ပါဖြစ်ကြသည်။
မီးခိုးရောင် (သို့မဟုတ်အညိုရောင် / အနက်ရောင်) ဟိုက်ဒရိုဂျင် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ (များသောအားဖြင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ကျောက်မီးသွေး) မှထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်စဉ်တွင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု၊
အပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင် မီးခိုးရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်ကာဗွန်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်း (CCS) ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စဉ်၏ GHG ထုတ်လွှတ်မှုအများစုကိုရှောင်ရှားရန်၊
ဟိုက်ဒရိုဂျင် Turquoise ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာ၏ pyrolysis မှတဆင့်ဘေးထွက်ပစ္စည်းသည်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အစိမ်း ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်တင်းပေးသောလျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သောအခါ (နှင့်အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်ဇီဝစွမ်းအင်အခြေခံသောဇီဝစွမ်းအင်ကိုအခြေခံသောဇီဝစွမ်းအင်အခြေခံသောနည်းလမ်းများမှတဆင့်သို့မဟုတ်အစိုင်အခဲဇီဝလောင်စာဓာတ်ငွေ့);
အဝါရောင် (သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်) ဟိုက်ဒရိုဂျင် , နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံများမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးထောက်ပံ့လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့်အခါ။
၎င်းအရောင်များအပြင်“ သန့်ရှင်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်”၊ “ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်”၊ “ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရှိသောဟိုက်ဒရိုဂျင်” စသည့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းအုပ်စုများကိုရည်ညွှန်းသောအခါကွဲပြားခြားနားသော nomenclatures များကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ ဘုံရည်ညွှန်းမှုပေးရန်ထူးခြားသောစံသတ်မှတ်ချက်မရှိသောကြောင့်ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည်တစ်ခါတစ်ရံရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ ဤစာတမ်းတွင်ကာဗွန်နိမ့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဟူသောဝေါဟာရသည်အစိမ်း၊ အပြာ၊ အနီနှင့်အဝါရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တို့ပါဝင်သည်။ သို့သော်၊ အရောင်တစ်ခုချင်းစီတွင်လည်းများပြားသောအချက်များကြောင့်ကာဗွန်ပြင်းထန်မှု၏သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ကာဗွန်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ - bioenergy နှင့် CCS တို့ပါဝင်သောလမ်းကြောင်းများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
အဓိကကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများ၏အစီအစဉ်ကိုပုံ ၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အပိုလမ်းကြောင်းများတည်ရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်သုတေသနအဆင့်တွင်ရှိနေသေးသော်လည်း၎င်းတို့မပါဝင်ပါ။
ပုံ 1 ။ အရောင်အားဖြင့်ကွဲပြားကွဲပြားခြားနားသောဟိုက်ဒရိုဂျင်မျိုးဆက်လမ်းကြောင်း။ SMR: ရေနွေးငွေ့မီသိန်းပြုပြင်ခြင်း, ATR: အလိုအလျောက်အပူပြုပြင်ခြင်း, CCS: ကာဗွန်ဖမ်းယူခြင်းနှင့် sequestration ။
နည်းပညာလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီသည်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကိုဖော်ပြသော်လည်း၊ အထူးသဖြင့်အရင်းအမြစ်များရရှိမှု၊ စွမ်းအင်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုများသို့မဟုတ်တိကျသောပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်အမျိုးသားမဟာဗျူဟာများပေါ်တွင်အခြေခံသည့်ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများအပါအ ၀ င်တိကျသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခု၏ရွေးချယ်မှုသည်နောက်ထပ်ရှုထောင့်များနှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးသည် စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္sectorsများ  ။ ထို့အပြင်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းစွမ်းအင်စနစ်များကိုအလွန်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ခြင်းကြောင့်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်သွယ်မှုသည်ကမ္ဘာ့စွမ်းအင်ပထဝီနိုင်ငံရေးတွင်အလားအလာရှိသောဂိမ်းလဲလှယ်သူဖြစ်လာနိုင်သည်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့်ထိရောက်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရန်အတွက်အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သိသိသာသာပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကိုလျှော့ချရန် RES လိုအပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်အပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်နောက်ပိုင်းကာလတွင်အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အတွက်လမ်းခင်းရာတွင်ကူညီခြင်းဖြင့်ရေတိုနှင့်အလယ်အလတ်ကာလအတွက်အသုံးဝင်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းသည်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းဟိုက်ဒရိုဂျင်အခြေခံနည်းပညာများတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအဓိကရှုထောင့်များကိုတင်ပြသည်။ ဤစာတမ်းသည်အစိမ်းနှင့်အပြာဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းများကိုအဓိကထားသည်၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေးကိုပံ့ပိုးရန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကစဉ်းစားနေသောချဉ်းကပ်နည်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းသည်နည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်ကျစရိတ်၏အဓိကမောင်းနှင်အားများ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်ပထဝီနိုင်ငံရေးအပေါ်အကျိုးဆက်များဖြစ်လိမ့်မည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကိုဘက်မလိုက်သောဖော်ပြချက်အဖြစ်တင်ပြရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်သောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်၏ရှုပ်ထွေးမှု၏ရုပ်ပုံကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါစာတမ်းကိုဖွဲ့စည်းထားသည် - အပိုင်း ၂ သည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းအတွက်နည်းပညာများအပါအ ၀ င်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအဓိကနည်းပညာရှုထောင့်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောနောက်ဆုံးကဏ္inများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ အဆောက်အ ဦး များနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း။ အခန်း (၃) သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုအလေးထားသည်။ မတူကွဲပြားသောအမျိုးသားမဟာဗျူဟာများ၊ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ၏ဖြစ်နိုင်ချေအခန်းကဏ္ as နှင့်နိုင်ငံများအကြားသဘောတူညီချက်များကိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အပိုင်း ၄ သည်စွမ်းအင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအခြေအနေတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အားရေရှည်တည်တံ့ပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုရန်ထောက်ခံသည့်မူဝါဒဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည့်အဓိကအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောဆွေးနွေးမှုကိုတင်ပြသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သုံးစွဲသူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားစွာရရှိခြင်းကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်းကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိသောနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောစိန်ခေါ်မှုများစွာကိုရှည်လျားရှုပ်ထွေးသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်လျှောက်တွင်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုအစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်လမ်းကြောင်းများမှတဆင့်သိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်နောက်ဆုံးအသုံးပြုခြင်းကိရိယာများသည်အများအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတားအဆီးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤအပိုင်းသည်လက်ရှိအခြေအနေနှင့်အနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အလားအလာများကိုဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးတွင်အဓိကကျသည့်ကဏ္aspectsများကိုတင်ပြသည်။
၂.၁ ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်မျိုးဆက်
ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အပေါများဆုံးဓာတုဒြပ်စင်ဖြစ်သော်လည်းအောက်ဆီဂျင်နှင့်ဆီလီကွန်ပြီးနောက်၎င်းသည်၎င်း၏စင်ကြယ်သောပုံစံဖြင့်မရရှိနိုင်သဖြင့်၎င်းကိုစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်မသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်အခြားအရင်းအမြစ်များမှထုတ်လုပ်သင့်သည့်စွမ်းအင်သယ်ဆောင်သူဖြစ်သည်။ ရေမှလျှပ်စစ်မှလျှပ်စစ်မှတဆင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ၁၉ ရာစုမှစခဲ့သော်လည်းယနေ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်လိုအပ်မှုမှာကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ (သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေးနှင့်ရေနံ) တို့အပါအ ၀ င်ရေနွေးငွေ့မီသိန်းပြုပြင်ခြင်း (SMR)၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဓာတ်တိုးခြင်းနှင့်ကျောက်မီးသွေး gasification ။ ထိုဖြစ်စဉ်များကိုများသောအားဖြင့်မီးခိုးရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ CCS နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ၎င်းတို့ကိုကာဗွန်နိမ့်သောဖြေရှင်းနည်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းဟုခေါ်သည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်များကြောင့်စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရသောရေလျှပ်စစ်မှလျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှုမှဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို RES မှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ လက်ရှိကုန်ကျစရိတ်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း -based ဖြေရှင်းချက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားနေဆဲနေစဉ်, RES လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် Electrolyzers နှစ် ဦး စလုံးများအတွက်မျှော်မှန်းသင်ယူမှုခါးဆစ်ကလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်များတွင်အလားအလာဖြေရှင်းချက်စေနိုင်ပါတယ်။
အစိမ်းနှင့်အပြာဟိုက်ဒရိုဂျင်အတွက်အနာဂတ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုကိုပုံ ၂ တွင်ဖော်ပြထားပြီး BNEF အချက်အလက်များအရတွက်ချက်သည်။ ဒီကိန်းဂဏန်းသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဒြပ်ထု၏ဘယ်ဘက် ၀ င်ရိုးနှင့်စွမ်းအင်ပါဝင်မှုပမာဏတို့၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုဖော်ပြထားသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏အပူနှုန်း (ကီလိုဂရမ်လျှင် ၁၂၀ MJ၊ ကီလိုဂရမ်လျှင် ၃၃.၃ kWh) ။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်ကျစရိတ်များသည်အရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်အတွက်အကောင်းမြင်တွက်ချက်ထားသည့်ကြီးမားသောစီမံကိန်းများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အပြာရောင်သည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဒေါ်လာ ၁.၁ မှ ၁၀.၃.၃ / MMBtu နှင့်ကျောက်မီးသွေးဒေါ်လာ ၄၀ မှ ၁၁၁၆ / t အပေါ်အခြေခံသည်။ အနာဂတ်ကုန်ကျစရိတ်ပrangesိပက္ခ၏မရေရာမှုသည်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ပုံ2။ ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများအတွက်အနာဂတ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်ကျစရိတ်၏ခန့်မှန်းချက်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်နိမ့်အပူတန်ဖိုး (LHV) အပေါ် အခြေခံ၍ စွမ်းအင်ကိန်းဂဏန်းများ။ BNEF အချက်အလက်များအပေါ်စာရေးသူ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ၂၀၂၀ 
အခွားသောလေ့လာမှုများနှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးများနှင့်အနာဂတ်ခန့်မှန်းချက်သတင်းပို့ပါ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IRENA) မှ ၂၀၅၀ တွင်လေအားလျှပ်စစ်မှထုတ်လုပ်သည့်အခါတစ်ကီလိုလျှင် ၀.၉၅ ဒေါ်လာ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအခြေခံသည့်အခါ ၁.၂ အမေရိကန်ဒေါ်လာအထိနိမ့်ကျသည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။ ထိုလမ်းကြောင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအခန်း ၂.၁.၁ နှင့်အခန်း ၂.၁.၂ တွင်ဆွေးနွေးထားပါသည်။
အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းများအပြင်အထူးသဖြင့်တိကျသောတိုင်းပြည်များသို့မဟုတ်ဒေသများရှိအခြားရွေးချယ်စရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ အနုမြူစွမ်းအင်မှဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်း [15, 16] ကိုဥရောပနည်းဗျူဟာများတွင်ဖော်ပြခဲသည်။ သို့သော်၎င်းသည်တရုတ်  နှင့်ရုရှား  ကဲ့သို့သောကမ္ဘာ့ဒေသများတွင်အလားအလာရှိသောအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်လာနိုင်သည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးဟိုက်ဒရိုဂျင်အတွက်အခြားနည်းလမ်းများမှာဇီဝလောင်စာဓာတ်ငွေ့ရည် (သို့) ဇီဝဓာတ်ငွေ့သုံးကုန်ကြမ်းအပေါ် အခြေခံ၍ SMR ကိုအခြေခံသည်။
၂.၁.၁ ။ အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်
ဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များနှင့်ရေလျှပ်စစ်ဓါတ်ဖြင့်ပေါင်းစပ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ လျှပ်စစ်နှင့်သန့်ရှင်းသောရေကို electrolyzer တစ်ခုသို့ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်ထွက်ရှိမှုများကိုထုတ်လုပ်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာများကိုရေလျှပ်စစ်ဓါတ်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Alkaline electrolyzers များသည်အနုပညာအဆင့်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးပရိုတွန်လဲလှယ်သည့်အမြှေးပါး (PEM) နည်းပညာများသည်သရုပ်ပြအဆင့်တွင်ရှိနေပြီး solid oxide electrolyzers များသည် R&D ပိုက်လိုင်းတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ PEM electrolyzers များသည်ပိုမိုမြင့်မားသော output output ဖိအားများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဝန်အကွာအဝေးနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သော startup နှင့် load variations များအပါအ ၀ င်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအတွက်အားသာချက်များကိုပေးလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များဖြန့်ကျက်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ နှစ်စဉ်စွမ်းရည်ဖြည့်စွက်မှုများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၂၅ မဂ္ဂါဝပ်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်၊ သို့သော်ကြေငြာသောစီမံကိန်းများကအလျင်အမြန်တိုးပွားလာပြီး ၂၀၃၃ ခုနှစ်တွင်စွမ်းအင်အသစ် ၁.၅ GW သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးအကြီးမားဆုံးစီမံကိန်းမှာ ၅၄၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိသည်။
လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများသည်အရွယ်အစားနှင့်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုအတိုင်းအတာကိုပြသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်လွှတ်မှုစွမ်းရည် (ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်ပါဝင်မှု (ပိုမိုမြင့်မားသောအပူတန်ဖိုးအဖြစ်တိုင်းတာသည်)) နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုအချိုးအစားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုပမာဏသည် (၆၅% မှ ၇၀% အထိ) (ထွက်ရှိမှုဖိအား ၁၀-၃၀ barg ၏စဉ်းစားသောအခါ)  ဖြစ်သည်။
Electrolysis နှင့်ဆက်စပ်သောနောက်ထပ်ပြissueနာတစ်ခုမှာရေသုံးစွဲမှုဖြစ်သည်။ စင်ကြယ်သောရေသုံးစွဲမှုသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထွက်ရှိမှု ၁ ကီလိုလျှင် ၁၀ မှ ၁၅ လီတာ  အတွင်းရှိရေဖြစ်ပြီးအအေးခံဓာတ်ငွေ့လိုအပ်သည်။ ရေချိုရင်းမြစ်များမရှိခြင်းတွင်ရွေးချယ်စရာမှာပင်လယ်ရေညစ်ညမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရေဆိုးပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ မတူညီသောနည်းပညာများကိုပင်လယ်ရေညစ်ညမ်းမှုအတွက်စီးပွားဖြစ်အသုံးချပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအလွန်နည်းပါးသောလျှပ်စစ်နှင့်ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်တွဲဖက်နိုင်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ကီလိုလျှင် ၂.၅ မှ ၄.၅.၅ အမေရိကန်ဒေါ်လာ  တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသော်လည်းအခြားအရင်းအမြစ်များကပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုးများကိုခန့်မှန်းကြသည်။ ကုန်ကျစရိတ်၏အထင်ရှားဆုံးအချက်နှစ်ချက်မှာ Electrolyzer ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် OPEX ကုန်ကျစရိတ်၏ ၉၀% ခန့်ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျမှုဖြစ်သည်။ အယ်လ်ကာလီဓာတ်အားထုတ်စက်များအတွက်လက်ရှိ CAPEX ကုန်ကျစရိတ်သည် ၇၅၀ ဝန်းကျင် EUR / kW (USD ၉၀၀ ၀ န်းကျင်ခန့်) ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၅ တွင်ယူရို ၅၀၀ (USD USD / kW ၆၀၀ ခန့်) အထိကျဆင်းသွားမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်၏ ၈၀% ခန့်သည် OPEX (တစ်နှစ်လျှင်လည်ပတ်ချိန်နာရီ ၄၀၀၀ ခန့်ကိုစဉ်းစားသောအခါ) ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆို၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျစရိတ်သည်အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်ကျစရိတ်၏အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။
သို့သော်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစျေးနှုန်းနှင့်နှစ်စဉ်လည်ပတ်ချိန်များအကြားအပေးအယူတစ်ခုရှိသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ရက်များ၌လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှော့ချခြင်းကိုအသုံးချခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ စီးပွားရေးပုံစံများသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဈေးနှုန်းသုညသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာမှပင်အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်နာရီပေါင်းများစွာအကန့်အသတ်ဖြင့်ရှိနေခြင်း၊ ထို့အပြင် Cloete et al ။ ရလဒ်များအရလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များ၏တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပိုက်လိုင်းများနှင့်သိုလှောင်ထားသည့်အခြေခံအဆောက်အအုံများ (ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုကိုင်တွယ်ရန်) နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်များ (လျှပ်စစ်ပိုလျှံမှုကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရန်အတွက်) အတွက်လည်းအရင်းအနှီးပိုမိုသုံးစွဲရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ လက်ရှိပါဝါစနစ်များ၏လက်ရှိဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပိုဆောင်းအလားအလာရှိသောအခက်အခဲများကိုအခြားသောပညာရှင်များကတင်ပြကြသည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အသုံးပြုရန်သေချာစေရန်စိမ်းလန်းသောလက်မှတ် ၀ ယ်ယူခြင်းအပြင်ထပ်ဆောင်းအခွန်နှင့်ကောက်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်သည်ရွေးချယ်ထားသောနေရာများတွင်လက်ခံနိုင်သောနှစ်ပတ်လည်ဝန်အချက်များသို့ရောက်ရှိနိုင်သောရည်စူးထားသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့်လေစွမ်းအင်စက်ရုံများနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုပေါင်းစပ်ပုံရသည်။ ဤကိစ္စတွင်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်မြင့်သောမောင်းနှင်မှုကြောင့် RES မှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူခြင်းနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အဆင်ပြေစွာသင်ယူခြင်းခါးဆစ်များသည်သိသိသာသာကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
BNEF မှအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စျေးနှုန်းများကို ၂၀၃၀ တွင် ၁.၂.၆ ဒေါ်လာနှင့် ၂၀၅၀ တွင် ၀.၈ မှ ၁.၆ ဒေါ်လာအထိနိမ့်ကျသည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။ သို့သော်အခြားသောလေ့လာမှုများအရအချို့သောအခြေအနေများတွင်စိမ်းလန်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုသည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများမှတဆင့်ရိုးရာထုတ်လုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယနေ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ အချို့ပညာရှင်များသည်အနိမ့်မျိုးဆက်စျေးနှုန်းများရရှိရန်အတွက်နေနှင့်လေစွမ်းအင်ကိုပေါင်းစပ်ရန်အဆိုပြုထားသည်။
ထိုကုန်ကျစရိတ်များသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုသာထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များရှိသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအချို့ကိစ္စများတွင်သုံးစွဲသူများသည်နောက်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်၏ထက်ဝက်ကိုပင်သုံးစွဲနိုင်သည်။
၂.၁.၂ ။ အပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အပြာသည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများမှဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောလက်ရှိဖြစ်စဉ်များသည်၎င်းတို့၏ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုအများစုကိုလျော့ချရန် CCS နည်းပညာများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ဟူသောအယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ဤချဉ်းကပ်နည်းသည်အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သို့ပြောင်းခြင်းထက်အကုန်အကျနည်းသော်လည်း CCS ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုသည်လူမှုရေးလက်ခံမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများအပြင်နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများပါ ၀ င်နိုင်သည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းအပြာရောင်သည်လက်ရှိတွင်7(ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့ + CCS) နှင့် 8 (SMR + CCS) အကြားနည်းပညာအဆင်သင့်အဆင့်များ (TRL) ရှိသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအနက်ရောင်မှအပြာရောင်သို့ပြောင်းရန်လိုအပ်သော CO2 ဖမ်းယူမှုနှုန်း၏စံသတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ လေ့လာမှုများစွာတွင်နည်းပညာနှင့် CO70 ဖမ်းယူအသုံးပြုမှုအဆင့်များပေါ် မူတည်၍ အမြင့်ဆုံး ၇၀% မှ ၉၅% အထိဖမ်းယူနိုင်သည့်နှုန်းကိုကိုးကားထားသည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့အပေါ် အခြေခံ၍ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အပြာရောင်ကိုစဉ်းစားသောအခါအထက်ပိုင်းအဆင့်တွင်မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနောက်ထပ်သက်ရောက်မှုကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ တိကျစွာတွက်ချက်ရန်ခက်ခဲသော်လည်းဤလေ့လာမှုကိုသုတေသနလေ့လာမှုများတွင်လျစ်လျူရှုထားလေ့ရှိသည်။
ကာဗွန်နိမ့်ဟိုက်ဒရိုဂျင် (ဆိုလိုသည်မှာအပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်) ကိုသတ်မှတ်ရန်ရည်ညွှန်းတံခါးခုံကို (၁၉၀၉) ခုနှစ်တွင် CertifHy စတီယာရင်အုပ်စုက (ဥရောပတစ်ခွင်စိမ်းလန်းသောနှင့်ကာဗွန်အနိမ့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုရောက်ရှိရန်တီထွင်ခဲ့သည်) ကို ၆၀ ကိုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အဆိုပြုထားသည် SMR အပေါ်အခြေခံသောအခြေခံစံနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် GHG ထုတ်လွှတ်မှု၏% လျော့ချရေး  ။ ဤတံခါးခုံကို ၃၁.၄ gCO60e / MJ (30 gCO36.4e / kWh) ဟုသတ်မှတ်ထားပြီးဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ ၉၁ gCO2e / MJ တန်ဖိုး (131 gCO2e / kWh) မှစတင်သည်။
အပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းများသည်မီးခိုးရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်မှရရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏အားသာချက်ဖြစ်သည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ရှိရင်းစွဲစက်ရုံများကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းကို CCS စနစ်များထည့်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်သည်ထိရောက်သောနှင့်တာရှည်ခံသိုလှောင်မှုကိုသေချာစေရန်အတွက်တိကျသောအခြေအနေများလိုအပ်သည်။ များသောအားဖြင့်မျိုးဆက်သစ်စက်ရုံကိုသိုလှောင်ရာနေရာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အပိုအဆောက်အအုံလိုအပ်နိုင်သည်၊ သီးခြား CO2 အခြေခံအဆောက်အ ဦး သည်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာတိုးမြင့်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် CCS စနစ်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည် SMR လုပ်ငန်းစဉ်၏စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို ၅% မှ ၁၄% အထိလျော့ချနိုင်သည်။
ထို့အပြင်အပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းများ၌ရေသုံးစွဲမှုသည်မကြာခဏသတိမမူမိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေသုံးစွဲမှုသည် electrolysis ဖြစ်စဉ်နှင့်မကြာခဏဆက်စပ်နေသော်လည်းအပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းများသည်သိသိသာသာရေကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးအချို့ကိစ္စများတွင်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဘဝသံသရာစာရင်းအရခံယူထားသောရေကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်ရလဒ်များအရ H2 တစ်ကီလိုလျှင်ရေသုံးစွဲမှုသည် SMR အတွက် ၂၄ L နှင့်ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့အတွက် ၃၈ လီတာဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်တခါတရံစိမ်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ဟုရည်ညွှန်းပြီး ၃-၅ TRL တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သောနောက်ထပ်လမ်းကြောင်းသည်မီသိန်း၏ pyrolysis ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများကိုသြစတြေးလျ၊ ဂျာမနီနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံများအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနေရာအနှံ့အပြားတွင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။ ထိုဖြစ်စဉ်တွင်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်မီသိန်းကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (ကာဗွန်နက်ဟုလည်းခေါ်သည်) အဖြစ်ခွဲခြားသည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်ငွေ့ CO3 ထက်သိုလှောင်ရန်နှင့်စီမံရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ထို့အပြင်အစိုင်အခဲကာဗွန်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းများအသုံးပြုနိုင်ပြီးဘေးထွက်ပစ္စည်းအစားအရင်းအမြစ်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ တာယာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပရင်တာများမှင်များအပါအ ၀ င်လက်ရှိကာဗွန်နက်အတွက်စက်မှုဇုန်ဈေးကွက်သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏တစ်နှစ်လျှင် ၅ မီတာအထိထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိကမ္ဘာ့စင်ကြယ်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ ၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။
၂.၂ ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စီးပွားရေးရှုထောင့်နှစ်ခုလုံးတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်၏ရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက်အရေးကြီးသောကဏ္ aspect တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်၎င်းကိုချုံ့ရန်သို့မဟုတ်အရည်ပျော်စေရန်သို့မဟုတ်၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောအခြားဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်သည့်အမိုးနီးယားသို့မဟုတ်အခြားအရည်အော်ဂဲနစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သယ်ဆောင်သူများ (LOHC) အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသိသိသာသာလိုအပ်နိုင်သည်။ နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာအများအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်များ၌ရှိသော်လည်းလက်ရှိသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဇယားများတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုရောစပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက်၏နောက်ထပ်ရှုထောင့်တစ်ခုမှာသိုလှောင်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းမှာအဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်လိုအပ်သည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလေးစားရန်နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်စနစ်တကျကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။
၂.၂.၁ ။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ Grid များတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရောစပ်ခြင်း
ဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းများကိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တင်ရန်အလားအလာရှိသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာလက်ရှိသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကွန်ယက်များတွင်ပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်နှင့်သန့်ရှင်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို အသုံးပြု၍ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုစတင်လျှော့ချရန်ဥရောပနိုင်ငံအသီးသီး [32, 33, 34] တွင်အဆိုပြုနေသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောနည်းဗျူဟာသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်ဆက်စပ်သောပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုအပြည့်အဝ အသုံးချ၍ ပြင်းထန်သောကန့်သတ်ချက်များရှိပြီး၎င်းကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်များတွင်အသုံးပြုရန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ရောနှောခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးကျေးဇူးများကိုတွက်ချက်သည့်အခါတွင်ပင်သက်သေပြရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကွန်ယက်များတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရောနှောနေခြင်းကိုစဉ်းစားသောအခါပုံမှန်ရောနှောမှုအချိုးများကို volumetric share အဖြစ်ဖော်ပြသည်ဟူသောအချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ထုထည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆရှိပြီးမီသိန်းဒြပ်စင်၏သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်စွမ်းအင်ဝေစုကိုတွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့်ဓာတ်ငွေ့ရောနှောခြင်းကိုစဉ်းစားသောအခါ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏အပူတန်ဖိုး၏ပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါဟိုက်ဒရိုဂျင်ဝေစုသည်များစွာနိမ့်ကျသကဲ့သို့၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာရှိသော CO2 ထုတ်လွှတ်မှုစုဆောင်းမှုလည်းဖြစ်သည်။ ရည်ညွှန်းချက်အနေနှင့်အများအားဖြင့်စဉ်းစားထားသော volumetric ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရောစပ်မှုအချိုးသည် ၁၀% နှင့် ၂၀% ၏စွမ်းအင်အချိုးသည် ၃.၅% နှင့် ၇.၆% အသီးသီးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောရောနှောမှုနှုန်းနှင့်အတူ CO10 ထုတ်လွှတ်မှု၏အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုယ်စားပြုမှုအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အပြာဟိုက်ဒရိုဂျင် 20% ဖမ်းယူမှုနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်, ပုံ 3.5 မှာကိုယ်စားပြုသည်။
ပုံ3။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဇယားကွက် (မသန့်စင်မီသိန်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း) တွင်ကွဲပြားခြားနားသော H2 volumetric blending အချိုးအတွက် CO2 ငွေစုဆောင်းမှု။
ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချမှုကိုမီသိန်း - ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရောစပ်မှု၏ထုတ်လွှတ်မှုအကြောင်းအချက်ကိုသဘာဝဓာတ်ငွေ့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်တွက်ချက်သည်။ ဇယားသည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု 200 g / kWh နှင့်အပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လွှတ်မှု ၃၂.၈ g / kWh ကို အခြေခံ၍ CCS ၏ ၉၀% ၏ယူဆချက်ကိုအခြေခံသည်။ ထို့ကြောင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြင့်အပြည့်အ ၀ အစားထိုးလိုက်ခြင်းဖြင့်အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအသုံးပြုသောအခါထုတ်လွှတ်မှု ၁၀၀% နှင့်အပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအသုံးပြုသောအခါ ၈၄% သည် (အပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တွင်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်နိမ့်သည်) ။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်အပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တို့၏အထက်ပိုင်းမီသိန်းဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများကိုဤဇယားတွင်မထည့်သွင်းပါ။
လက်ရှိသဘာဝဓာတ်ငွေ့ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်ကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ပမာဏမြင့်မားစွာလက်ခံရန်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကွန်ယက်များ၊ ဓာတ်ငွေ့မီတာများ၊ တွန်းစက်များနှင့်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများအပါအ ၀ င်အစိတ်အပိုင်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
သုတေသနလေ့လာချက်များအရလက်ရှိလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ကွန်ယက်များသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်ပိုက်လိုင်းအသစ်များတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာထင်ရှားသည့်စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ချေးခြင်းနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ပစ္စည်းများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်မီသိန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဟိုက်ဒရိုဂျင်၏စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနည်းပါးမှုကြောင့်လက်ရှိပိုက်လိုင်းအရွယ်အစားများမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းမှတ်သားရန်အရေးကြီးပါသည်။ လက်ရှိသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကထောက်ပံ့သောတူညီသောစွမ်းအင်ဝယ်လိုအားကိုစီမံခန့်ခွဲရန်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကိုစွမ်းအင်ထိရောက်စွာတိုင်းတာ။ သော်လည်းကောင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးမှုကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာများမှသော်လည်းကောင်းလျှော့ချရန်လိုအပ်သည်။
၂.၂.၂ ။ အဝေးသင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်စွမ်းအင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလားအလာပိုများလာပြီးလက်ရှိကုန်ကြမ်းလောင်စာသဘာဝဓာတ်ငွေ့ (LNG) နှင့်အလားတူပင်ကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းအဖြစ်မြင်ကြသည်။ နောက်အခန်းများတွင်ထပ်မံဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်းနိုင်ငံတကာနည်းဗျူဟာများနှင့်လမ်းပြမြေပုံများသည်အဆင်သင့်ရှိသောဒေသများတွင် (ဥပမာ - တန်ဖိုးနည်းသောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအရင်းအမြစ်များဖြင့်) ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏စိတ်ကူးအပေါ်အခြေခံသည်။ ၎င်းကိုဝယ်လိုအားမြင့်မားသောနိုင်ငံများနှင့်၎င်း၏ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်သာရှိသောနိုင်ငံများသို့တင်ပို့သည်။ မျိုးဆက်။
အလတ်စားအကွာအဝေးများမှဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုသယ်ဆောင်ရန်အနိမ့်ဆုံးနည်းလမ်းသည်ပိုက်လိုင်းမှတစ်ဆင့်မကြာခဏဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကွန်ယက်များမှာစက်မှုဇုန်များကိုအစေခံများဖြစ်သည်။ သို့သော်ပိုက်လိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်သည်အကွာအဝေးနှင့် လိုက်၍ မျဉ်းဖြောင့်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှအလွန်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးတွင်သင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်စျေးနှုန်းချိုသာလာသည် (ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ဆိုင်သောအခြားအားသာချက်များအပြင်) သဘာဝဓာတ်ငွေ့အတွက်မူပိုက်လိုင်းများ၏စီးပွါးရေးရေရှည်တည်တံ့မှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြီးမားသောပမာဏနှင့်အဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရေရှည်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းတို့လိုအပ်သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးသည်ပို့ကုန်တစ်ခုတည်းအတွက်နိုင်ငံများစွာကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကြောင့်ပိုမိုကြီးမားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ဤရှုထောင့်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်း LNG တိုးပွားလာစေပြီးအလားတူယုတ္တိဗေဒသည်အနာဂတ်တွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စီးပွားရေးရှုထောင့်များကိုစဉ်း စား၍ ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရရှိနိုင်သည့်အခြားနည်းလမ်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ အချို့သောလေ့လာမှုများကနော်ဝေတွင်ဥရောပသို့ဂျပန်၊ သြစတြေးလျမှဂျပန်နှင့်ကိုရီးယား ၊ ချီလီ - ဂျပန်  နှင့်အာဂျင်တီးနား - ဂျပန်တို့အပါအ ၀ င်တိကျသောလမ်းကြောင်းများသို့အသေးစိတ်အကဲဖြတ်မှုများတင်ပြထားသည်။ သင်္ဘောများတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ကုန်ကျစရိတ်အလွန်အကျွံရှောင်ရှားရန်အတွက်တစ်ယူနစ်လျှင်အများဆုံးစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆလိုအပ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို၎င်း၏ဓါတ်ငွေ့ရောနေသောပုံစံများဖြင့်သင်္ဘောများတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်။ မရပါ။ အခြားဖြေရှင်းချက်များကိုလည်းစဉ်းစားနေကြသည်။
အဝေးမှဟိုက်ဒရိုဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကဲဖြတ်မှုအောက်တွင်ရှိနေသောရွေးချယ်မှုများတွင်အရည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ အမိုးနီးယားသို့မဟုတ် LOHC တို့ပါဝင်သည်။ LOHC သည်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပြီးဓာတုဓာတ်ပြုမှုအားဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုစုပ်ယူပြီးထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်သည်အရည်အတွက်မြင့်မားသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းကို cryogenic အပူချိန်တွင်ထိန်းသိမ်းသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အမိုးနီးယား (သို့) LOHCs ရှိသိုလှောင်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားဓာတုပစ္စည်းများသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်နောက်ထပ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သောနောက်ထပ်လုပ်ငန်းစဉ်များလိုအပ်သည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူစွာသိုလှောင်နိုင်သည်ကအကွာအဝေးများစွာတွင်အားသာချက်ရှိသည်။
ရရှိနိုင်သည့်စာပေများတွင်ပင်လယ်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်ထောက်ပံ့ရေးပမာဏနှင့်အကွာအဝေးအပေါ်များစွာမှီခိုနေသည်။ အနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်အားတက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်သယ်ယူရန်ဝေးလံသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လက်ရှိစီးပွားဖြစ်ရွေးချယ်စရာများမရှိကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြရန်အရေးကြီးသည်။ အချို့သောသရုပ်ပြစီမံကိန်းများဖြစ်သောသြစတြေးလျနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံများအကြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပြီးလာမည့်နှစ်များတွင်စမ်းသပ်လိမ့်မည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်အမိုးနီးယားသည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများမှသော်လည်းလက်ရှိတွင်ကမ္ဘာ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တင်ပို့သောကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်ထက်အမိုးနီးယားကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ထောက်ပံ့ခြင်းကွင်းဆက်တစ်လျှောက်ရှိရှိပြီးသားနှင့်သက်သေပြထားသောနည်းပညာများနှင့်စံနှုန်းများကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။ သို့တိုင်အမိုးနီးယားထုတ်လုပ်မှုတွင်နောက်ထပ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုများရှိနေသေးပြီးနောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများမှာသန့်စင်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်လိုအပ်သောအခါပြောင်းလဲခြင်းအဆင့်တစ်ခုထပ်မံလိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော permeable အမြှေးပါးလောင်စာဆဲလ်များကဲ့သို့တိကျသောနည်းပညာများ, အမိုးနီးယားအဆိပ်သင့်စေနိုင်ကြသည်, သူတို့သည်အလွန်မြင့်မားသောဟိုက်ဒရိုဂျင်သန့်စင်မှုလိုအပ်သည်။
ကွန်တီနင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏စီးပွါးရေးသည်လက်ရှိကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများတင်ပို့မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနိမ့်ကျမှုကိုရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အကြီးဆုံးသင်္ဘောများဖြစ်သည့်ရေနံတင်သင်္ဘောများသည်ကုဗမီတာလျှင် ၁.၃ မဂ္ဂါဝပ်ခန့်ရေနံစိမ်းကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ LNG သည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆမှာကုဗမီတာလျှင် ၆.၂ မဂ္ဂါဝပ်ရှိသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ ၂.၄ နှင့် ၃.၂ မဂ္ဂါဝပ်ရှိသည့်အရည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အမိုးနီးယားအတွက် ပို၍ ဆိုးသည်။
ထို့အပြင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်ကိုအပူချိန်အလွန်နိမ့်စွာထားရန်လိုအပ်သည် (ဥပမာ ၂၀ ကီလိုဂရမ်ခန့်) ။ ၎င်းသည်အလွန်အရည်အသွေးမြင့်မားသောလျှပ်ကာပစ္စည်းများလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးခရီးရှည်တစ်လျှောက်တွင်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများလည်းသိသာထင်ရှားနိုင်သည်။ (အခန်း ၂.၂.၄ တွင်ဆက်လက်ဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်း) ရေငွေ့ပျံနိုင်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို on-board power systems တွင်အသုံးပြုခြင်းအပါအ ၀ င်လျော့ချနိုင်သည့်နည်းလမ်းများရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကိုကြီးမားသောသင်္ဘောများပေါ်တွင်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်နိုင်ချေနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း၊ ။
၂.၂.၃ ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြန့်ဖြူးခြင်း
ခရီးဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပြင်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုလည်းလိုအပ်သည်။ ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများမှာပိုက်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ဓါတ်ငွေ့ရောနေသော H2 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သို့မဟုတ်ကုန်တင်ကားများမှတဆင့်အရည်သို့မဟုတ်ဖိအားပေးထားသောဟိုက်ဒရိုဂျင်များပါဝင်သည် ဂျာမနီ  (သို့) ပြင်သစ်  ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအပေါ်စာပေလေ့လာမှုပြုခြင်းသည်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထောက်ပံ့မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အချက်များစွာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသုံးပြုမှုကိုစဉ်းစားသောအခါအရေးပါသောအချက်တစ်ခုမှာဆီဖြည့်သည့်ဘူတာများ၏သိပ်သည်းဆဖြစ်သည်။ အပင်များ၏သိပ်သည်းဆမြင့်မားမှုကြောင့်ဓာတ်ငွေ့ဖြန့်ဖြူးရေးပိုက်လိုင်းများဖြန့်ဖြူးခြင်း၏စီးပွားရေးအားသာချက်မှာရှင်းလင်းလာသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ပုံမှန် ၀ ယ်လိုအားနည်းသောသို့မဟုတ်နည်းပါးသောဒေသများတွင်ဓာတ်ငွေ့ရောနှောနေသောနောက်တွဲယာဉ်များသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဓာတ်ငွေ့ကုန်တင်ယာဉ်များကိုစဉ်းစားသောအခါဖိအားအဆင့်သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏နောက်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်အပိုဆောင်း parameter တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၅၀ မှ ၅၄၀ ဘားအထိအမျိုးမျိုးသောဖိအားအဆင့်များကိုစဉ်းစားသည့်အခါအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သိုလှောင်မှုနှင့်ချုံ့ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်နောက်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်၏အမျိုးမျိုးသောရှယ်ယာများကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်သည်အကွာအဝေးနှင့်ပမာဏပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထောက်ပံ့မှု၏အကွာအဝေးနှင့်မြင့်မားသောပမာဏသည်မြင့်မားသောဖိအားပေးကုန်တင်ကားများပေါ်တွင်မှီခိုနေပြီးကီလိုမီတာ ၂၀၀ ထက်နိမ့်သောအကွာအဝေးတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအောက်ပိုင်းဖိအားများ၌သိုလှောင်ထားခြင်းကပိုမိုကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုပြသည်။
eachရိယာတစ်ခုစီအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတည်နေရာနှင့်လည်းသက်ဆိုင်လိမ့်မည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင် (green) ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါ electrolyzers ၏တည်နေရာနှင့်အရွယ်အစား၏အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရရှိမှုပေါ်မူတည်သည်။ ထို့အပြင်ဓာတ်အားလိုင်းများမှတစ်ဆင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပိုက်လိုင်းများသို့မဟုတ်ကုန်တင်ကားများမှတဆင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့အပေါ်မူတည်သည်။ စွမ်းအင်သယ်ဆောင်သူနှစ် ဦး လုံးပါ ၀ င်သည့်စနစ်ရှုထောင့်အားအကောင်းဆုံးအဖြေရှာရန်လိုအပ်သည်။
2.2.4 ။ သိုလှောင်ခြင်း
အမျိုးမျိုးသောအဆင့်များ၌ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ နည်းပညာနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံ (အရည် / ဓာတ်ငွေ့)၊ ၎င်း၏ပမာဏ၊ သိုလှောင်မှုကြာချိန်နှင့်အာမခံရန်လိုအပ်သောအခြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အဓိကကွာခြားချက်မှာ၎င်း၏ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၏အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုကိုကိုင်တွယ်ရန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်ထားသည့်ရာသီအလိုက်ကြီးမားခြင်းတို့အကြားပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တလျှောက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အားသိုလှောင်ခြင်းတွင်ဆိပ်ကမ်းများ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ လောင်စာဆီဘူတာများနှင့်သင်္ဘောများ၊ ကုန်တင်ကားများနှင့်၎င်းကိုမောင်းနှင်ရန်အသုံးပြုသောမော်တော်ယာဉ်များအပါအ ၀ င်မတူကွဲပြားသောယာဉ်များပေါ်တွင်သိုလှောင်ခြင်းပါဝင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်စတီးလ်၊ ဖန်မျှင်ဖိုင်ဘာ၊ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာနှင့်ပိုလီမာများအပါအ ၀ င်မတူညီသောပစ္စည်းများရှိသည့်ရေယာဉ်များတွင်ဓာတ်ငွေ့ကိုမြင့်မားသောဖိအားဖြင့်သိုလှောင်ထားသည်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေသောပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သင်္ဘောအမျိုးအစား ၄ မျိုးရှိပြီးအလေးချိန်၊ ဖိအားနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အော်ပရေတာဖိအားများသည် ၅၀ မှ ၁၀၀ MPa အတွင်းကွဲပြားပြီးဖိအားတစ်ခုအတွက်ဖိအားများသောအားနည်းချက်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မော်တော်ယာဉ်ပေါ်တွင်သိုလှောင်မှုစနစ်များအတွက်အလေးချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များအဖြစ်စဉ်းစားသည်။
အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို၎င်း၏အရည်အခြေအနေထဲတွင်သိုလှောင်ရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဤဖြေရှင်းချက်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကြောင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအရည်ပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်အခြေအနေများအတွက်ကန့်သတ်ထားသည်။ ကြီးမားသောစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ရုံများရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်ထွက်မှုသည်ယေဘုယျအားဖြင့် H12.5 တစ်ကီလိုလျှင် ၁၂.၅-၁၅ kWh လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲနေသည်။ ၎င်းသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း၏ ၃၃.၃ kWh နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာသောပမာဏဖြစ်သည်။ နည်းပညာတိုးတက်မှုသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်၏လေးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိနေဆဲဖြစ်သော H15 တစ်ကီလိုလျှင် ၇.၅-၉ kWh သို့လျှော့ချနိုင်သည်။
အရည် H2 သိုလှောင်မှုသည်များသောအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၀.၂% မှ ၀.၃.၃ ရာခိုင်နှုန်းသောအနာစိမ်းများမှသက်ရောက်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ရေငွေ့ပျံခြင်း, အကြံပေးအဖွဲ့ထဲမှာဖိအားတိုးမြှင့်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြသောကြောင့်လုံခြုံရေးပြissuesနာများကိုရှောင်ရှားရန်ထုတ်ပယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထရပ်ကားများနှင့်သင်္ဘောများကဲ့သို့သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်သိုလှောင်မှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်ကိုပြသသော်လည်း၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ လေဆာရောင်ခြည်ကာကွယ်ခြင်း၊ အအေးခံစနစ်များသို့မဟုတ်နိုက်ထရိုဂျင်အရည်အအေးများအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောဖြေရှင်းနည်းများကိုအဆိုပြုထားသည်။
အမိုးနီးယားနှင့် LOHC ကဲ့သို့သောအခြားဓာတုပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုသိုလှောင်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ (ဥပမာအပူချိန်နှင့်ဖိအား) တို့တွင်စိန်ခေါ်မှုနည်းပါးပါသည်။ ၎င်းသည်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များမှလိုအပ်သောအပိုဆောင်းထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အဆင့်များနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုတရားမျှတစေသည်။ ။ အမိုးနီးယားကိုအရည်အခြေအနေတွင် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့်အလယ်အလတ်ဖိအား (၁၀ ဘား) တွင်သိုလှောင်နိုင်သည်။ LOHC တွင်အမျိုးမျိုးသောဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများပါ ၀ င်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့၏ပုံမှန်လက္ခဏာမှာ၎င်းတို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
အသေးစားနှင့်အလတ်စားသိုလှောင်မှုပမာဏသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အကြီးစားရာသီအလိုက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုကို RES မှစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အဆိုပြုခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်နေရောင်ခြည်ကဲ့သို့သောအချို့ဒေသများတွင်တစ်နှစ်အတွင်းထွက်ရှိမှု၏သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုကိုပြသသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ရာသီအလိုက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုပမာဏသည်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီးတစ်နှစ်အတွင်းသံသရာအနိမ့်အမြင့်ပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်ယင်း၏စီးပွားရေးအမြတ်အစွန်းသည်သိုလှောင်မှုကြာချိန်နှင့်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နိမ့်သောကုန်ကျစရိတ်တို့ကြောင့်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုနိမ့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်ခြင်းအတွက်မြေအောက်ရွေးချယ်စရာများရှိရာဆားဂိတ်များ၊ ရေအောင်းလွှာများသို့မဟုတ်ကုန်ခမ်းသွားသောရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်ကန်များဖြစ်သည်။ လတ်တလောတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စင်ကြယ်မှုကိုကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ယူကေတွင်ဆားငန်ဂူများပေါ်တွင်အခြေခံထားသည်။ စာပေလေ့လာမှုများသည်ဥရောပ [၅၄၊ ၅၅]၊ တရုတ်  နှင့်ကနေဒါတို့အပါအဝင်ဒေသအမျိုးမျိုးအတွက်သိုလှောင်မှုအလားအလာကိုအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
အများအပြားသုတေသနလုပ်ငန်းများ  အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးစီးပွားကြုံတွေ့ရသောဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုများအတွက်အပိုဆောင်း option ကို, ဓါတ်ငွေ့ရောနေသောဟိုက်ဒရိုဂျင်၏သိုလှောင်မှုဖိအားကိုလျှော့ချရန်စုပ်ယူပစ္စည်းများ၏အကွာအဝေး exploiting ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။ Solid-state ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်ပစ္စည်းများကိုယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ဓာတုနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းမှတစ်ဆင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုသိုလှောင်ထားသည့်သတ္တုဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိစိမ့်ဝင်မှုပါ ၀ င်သည့် porous ပစ္စည်းများ။ အဓိကသုတေသနရည်မှန်းချက်မှာဤပစ္စည်းများ၏အလေးချိန်ကိုလျော့ချရန်၊ ဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိအသုံးချပရိုဂရမ်များသည်အလေးချိန်သည်အရေးကြီးသောအချက်မဟုတ်သောစာရေးကိရိယာသိုလှောင်မှုသိုလှောင်ရာသိုလှောင်ခန်းများသို့မဟုတ် forklifts များအတွက်သီးသန့်ကိစ္စများတွင်သာကန့်သတ်ထားသည်။ နောက်ထပ်သုတေသနသည်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားကိုရှောင်ရှားရန်, ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏စည်းနှောင်အစွမ်းသတ္တိကိုထိန်းချုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ nanosizing ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်  ။
၂.၃ ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဝယ်လိုအား
အဓိကအားဖြင့်အနာဂတ်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်အပေါ်အာရုံစိုက်ထားသော်လည်းလက်ရှိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်လိုအပ်ချက်မှာဆယ်စုနှစ်များစွာမြင့်တက်လျက်ရှိသည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ IEA  အရကမ္ဘာ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်လိုအပ်မှုသည် ၁၉၇၅ ရှိ H30 ပမာဏ၏ ၃၀ တန်ချိန်ထက်နည်းပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၁၁၅ တန်အထိရှိခဲ့သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှစ်ခုလုံးသည်စင်ကြယ်သောပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း၊ အခြားဓာတ်ငွေ့များနှင့်ရောနှောထားသည်။2ခုနှစ်တွင်တန်ချိန်။ အဓိကလိုအပ်ချက်မှာစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အများအားဖြင့်ရေနံချက်စက်ရုံများသို့မဟုတ်ဓာတုဗေဒထုတ်လုပ်မှု (အမိုးနီးယားနှင့်မက်သနော) မှဖြစ်သည်။
ဥရောပသမဂ္ဂကိုအာရုံစိုက်လေ့လာသည့်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုအရလက်ရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်စဉ်းစားခဲ့ကြသောနိုင်ငံအားလုံး၏ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အလားအလာအောက်တွင်ရှိသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ လက်ရှိအီးယူဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုမှာ ၉.၇၅ တန်ချိန်ရှိပြီးလျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှုသို့ပြောင်းသွားပါကစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှု၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၂၉၀ TWh လိုအပ်သည်။
သို့သော်အနာဂတ်တွင်စွမ်းအင်စနစ်ကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်အဖြစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင် ၀ ယ်လိုအားသိသိသာသာများပြားလာမည်ဟုမျှော်လင့်ရပြီးသန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်လိုအပ်သည့် RES အတိုင်းအတာကိုမလုံလောက်နိုင်ပါ။ ဤပြForနာကြောင့်အကူးအပြောင်းကာလတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဝယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းရန်အပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် RES စကေးကိုလက်ရှိလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကိုဖယ်ရှားရန်ရည်စူးထားရန်လိုအပ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းသည်လက်ရှိကမ္ဘာ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်သုံးစွဲမှုအားလုံးနီးပါးတွင်တာ ၀ န်ရှိသည်။ သန့်စင်စက်ရုံများနှင့်ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းများသည်အများဆုံးတောင်းဆိုသည့်ကဏ္sectorsများဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ရေနံထုတ်ကုန်များတွင်ဆာလ်ဖာပါဝင်မှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်သန့်စင်စက်ရုံများတွင်အသုံးပြုပြီးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်နှင့်အချို့သောအခြေအနေများတွင်အရည်အသွေးနိမ့်သောလေးလံသောဆီကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအရ ၀ ယ်လိုအား၏သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သည်အခြားသန့်စင်စက်ရုံများမှထွက်ရှိသည့်ထုတ်ကုန်များအဖြစ်ရရှိသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေပြီးကျန်ကိုမူ SMR မှတစ်ဆင့်ထုတ်လုပ်သည်သို့မဟုတ်ပြင်ပထုတ်လုပ်သူများကထောက်ပံ့သည်။
အချို့ကိစ္စများတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များ၏တင်းကျပ်သောသန့်စင်ပြီးစီးပွားရေးအနားသတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများသည်ရေနံချက်စက်ရုံများအတွက်အနာဂတ်တွင်စုစုပေါင်းစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအများဆုံးအဖြစ်ကျန်ရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိ SMR စက်ရုံများတွင် CCS ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်တင်းနိုင်သည့်စွမ်းအင်သစ်များဖြန့်ဖြူးခြင်းထက်ပိုမိုလွယ်ကူစွာဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် CCS စက်ရုံများသည်အချို့သောဆိုဒ်များတွင်မရနိုင်သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်အခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်အမိုးနီးယားနှင့်မက်သနောထုတ်လုပ်မှုအတွက်အစာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အမိုးနီးယားထုတ်လုပ်မှုကိုအဓိကအားဖြင့်ဓာတ်မြေသြဇာအတွက်အသုံးပြုသည်။ မက်သနောကိုပလပ်စတစ်အတွက်တန်ဖိုးရှိသောဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၄ င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်လောင်စာများနှင့်ရောနှောအသုံးပြုသည်။ ၂၀၁၈ တွင်အမိုးနီးယားထုတ်လုပ်မှုသည် H2018 ပမာဏ၏ ၃၀ တန်ချိန်နှင့်မက်ထရိုကို ၁၂ မီလီယံခန့်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ဤစွမ်းအင်မဟုတ်သောအသုံးချခြင်းများအတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများသည် ၂၀၅၀ တွင် ၄၂ တန်နှင့် ၂၃ တန်အထိရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုကိန်းဂဏန်းများသည်လက်ရှိအသုံးချမှုကိုသာစဉ်းစားနေပြီးအမိုးနီးယားနှင့်မက်သနောကိုလောင်စာအဖြစ်ပိုမိုအသုံးပြုပါကထိုပမာဏသည်သိသိသာသာများပြားလာနိုင်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုမှီခိုအားထားသည့်အခြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတစ်ခုသည်သံကိုတိုက်ရိုက်လျှော့ချခြင်းမှတဆင့်သံမဏိထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းစနစ်သည်ကမ္ဘာ့အဓိကသံမဏိထုတ်လုပ်မှု၏ ၁၀% အောက်သာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်ကဏ္sectorsများအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ခြင်းနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်ကျစရိတ်များလျော့နည်းပါကအနာဂတ်တွင်၎င်း၏ရှယ်ယာများတိုးလာနိုင်သည်။ လက်ရှိ H10 သုံးစွဲမှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်သဘာ ၀ ဓာတ်ငွေ့နှင့်ကျောက်မီးသွေးမှထုတ်လုပ်သည်။ အနာဂတ်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အပူချိန်မြင့်မားသောအပူကိုထုတ်ပေးရန်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေအပါအ ၀ င်အခြားအပလီကေးရှင်းများသို့လည်းသက်ရောက်နိုင်သည်။
2.3.2 ။ တင်ဆောင်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ကမ္ဘာ့ဟိုက်ဒရိုဂျင် ၀ ယ်လိုအား၏အနည်းငယ်မျှသောဝေစုကိုရရှိစေသော်လည်းဤကဏ္ sector သည်ရေနံထုတ်ကုန်များအပေါ်မှီခိုအားထားမှုနှင့်အချို့သောအသုံးချခြင်းများတွင်ကာဗွန်နည်းမှုနည်းသောနည်းလမ်းများကြောင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလားအလာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသုံးပြုမှုကိုအဓိကထားသောပထမဆုံးအပိုင်းများထဲမှတစ်ခုမှာခရီးသည်တင်ကားများဖြစ်သည်။ ပုံ (၄) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအချို့သောနိုင်ငံများတွင်ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အမေရိကန် (အများအားဖြင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ) နှင့်ဂျာမနီတို့အပါအ ၀ င်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကားများဈေးကွက်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၅ အထိကမ္ဘာ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကားအရေအတွက် ၁၀ ဆတိုးလာခြင်း၊ ယူနစ် ၁၉,၀၀၀ နီးပါးသို့ရောက်ရှိလာခြင်းသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်လမ်းများပေါ်ရှိလျှပ်စစ်ကား ၁၇,၀၀၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ဘက်ထရီလျှပ်စစ်ကားပါကင်သည်ယူနစ် ၄.၈ သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည်ဟုစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ရှုထောင့်သို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်အချို့သောနိုင်ငံများရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်မော်ဒယ်များကိုရောင်းချနေစဉ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကားထုတ်လုပ်သူများကဘက်ထရီလျှပ်စစ်ယာဉ်များကိုရွေးချယ်ကြသည်။
ပုံ4။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်ခရီးသည်တင်ကားများ။ ကိုးကားချက်များအတွက်စာရေးဆရာများ၏အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက် [64, 65, 66]
ဟိုက်ဒရိုဂျင်မော်တော်ယာဉ်များသည်လျှပ်စစ်ယာဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အထူးအားသာချက်များရှိသည်။ လက်ရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်၏စျေးနှုန်းမြင့်မားမှုကသူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအကြီးအကျယ်နှောင့်နှေးစေသည်။ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကိုစဉ်းစားသောအခါ၎င်းသည် EVs ထက်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ခြင်း၏အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ကားတစ်စီးသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏လေးပုံသုံးပုံခန့်ကိုအသုံး ၀ င်သောစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်းဟိုက်ဒရိုဂျင်ကားတစ်စီး၏တူညီသောပုံမှာသုံးပုံတစ်ပုံနိမ့်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကားများတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖိအားနှင့်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်လေယာဉ်ဆီလောင်စာများအပါအဝင်အပိုပစ္စည်းများလိုအပ်သည်။ သို့သော်အနာဂတ်ရွေးချယ်စရာနည်းပညာများ၏အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မသေချာမရေရာမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်တိကျသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်စောလွန်းသေးသည်။ သော့ခတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုရှောင်ရှားရန်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရှေ့ဆက်တိုးမြှင့်သင့်သည်။
ပုဂ္ဂလိကကားများအပြင်အချို့နိုင်ငံများသည်လည်းတက္ကစီယာဉ်များကဲ့သို့တိကျသောအသုံးချမှုများကိုစမ်းသပ်နေကြသည်။ ထင်ရှားသောသာဓကတစ်ခုမှာပါရီမြို့တော်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အကုန်တွင်ကားအစီး ၁၀၀ ပါသောဟိုက်ဒရိုဂျင်တက္ကစီစုစုပေါင်း ၃၂ စီးအထိရောက်ရှိရန်ရည်မှန်းထားသည်။ ဥရောပလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးစနစ်အော်ပရေတာများ၏ကွန်ယက် (ENTSO-E) မှအကြံပေးသောစီမံကိန်းသည် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်ပါရီရှိအငြင်းပွားဖွယ်ယာဉ် ၁၅၀၀၀ ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ယူရိုဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်မြို့တော်တွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်နိုင်စွမ်း ၁၁ GWh ထည့်သွင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ 
အထူးသဖြင့်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆမြို့ပြဒေသများတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကားများတပ်ဖြန့်ရာတွင်အရေးပါသောခြေလှမ်းမှာထိရောက်သောဆီဖြည့်သည့်ဓာတ်ဆီဆိုင်များရှိသည်။ ဆီဖြည့်သည့်နေရာများအတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကိုထိုးဖောက်ခြင်းအဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်မတူညီသောအရင်းအမြစ်များမှဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုရရှိနိုင်မှုကိုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်တီထွင်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့်ပထမအဆင့်တွင်နိုင်ငံများစွာသည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအခြေပြုဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုအသုံးချနိုင်သော်လည်းအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆီသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဓာတ်ဆီဆိုင်များ၏ဒီဇိုင်းကိုအလယ်အလတ်နှင့်ရေရှည်အမြင်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်လောင်စာဆီဖြန့်ဖြူးရေးစခန်းများကိုဖြန့်ကျက်ခြင်းသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အခြေပြုကားမျှဝေသည့်စနစ်များကဲ့သို့တိကျသောအသုံးချမှုများနှင့်လည်းချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ဘတ်ထရီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏လက်ရှိအားသာချက်များသည်အထူးသဖြင့်တာရှည်ခရီးစဉ်များတွင်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ဤနည်းပညာ၏အလားအလာကို ဦး တည်သည်။ ဒီဇယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်တင်ကားများ၏အားသာချက်များကိုဘဝသံသရာရှုထောင့်မှပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ချုံ့ခြင်းနှင့်အရည်အဖြစ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုသည်နောက်ဆုံးရလဒ်တွင်သိသိသာသာအလေးချိန်ရှိသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုတဖြည်းဖြည်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကာလတိုအခွင့်အလမ်းသည်လက်ရှိလောင်စာဆီစနစ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်လောင်စာဆီကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်သောထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးသည်ဒီဇယ်ဆီနေရာရွှေ့ပြောင်းမှုအချိုးနှင့်အချိုးကျရှိသည်။ သို့သော်ကျွမ်းကျင်သူများကခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည့်လျှပ်စစ်ဘက်ထရီများတွင်ကုန်ကျစရိတ်လျော့ကျခြင်းသည်ကုန်တင်ကားများအတွက်အနိမ့်ကာဗွန်နိမ့်အဖြေများဖြစ်လာနိုင်ပြီးလျှပ်စစ်အဝေးပြေးလမ်းကဲ့သို့သောအခြားနည်းပညာများနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများသည်ထရပ်ကားများတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အသုံးပြုမှုကိုစမ်းသပ်ရန်တဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားလာကြသော်လည်းလမ်းပေါ်တွင်စီးပွားဖြစ်မော်ဒယ်များမရှိသေးပါ။ မော်တော်ယာဉ်များဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်တပြိုင်နက်သင့်တော်သောဆီဖြည့်သည့်အခြေခံအဆောက်အအုံများရရှိရန်အာမခံရန်အရေးကြီးသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်တင်ယာဉ်များကိုနော်ဝေး  နှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံတို့တွင်စမ်းသပ်လျက်ရှိသည်။ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ဒီဇယ်လေးလံသောထရပ်ကားများကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ဟိုက်ဘရစ်ဒရိုင်ဘာအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်ရော့တာဆဲလ်ကုန်တင်ကားတစ်ထောင်သို့ရောက်ရှိရန်ရည်ရွယ်သည့်ရော့တာဒမ်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုကဲ့သို့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးတွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များစွာပါ ၀ င်သည့်အစုအဖွဲ့ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာဖြင့်ချထားသည်။ သူတို့၏ရည်မှန်းချက်မှာနယ်သာလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ဂျာမနီတစ်လွှားရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်စင်္ကြံကိုထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်။ အခြားလေ့လာမှုများမှာတရုတ်  နှင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်များကဲ့သို့သောအခြားကမ္ဘာ့ဒေသများရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်တင်ကားများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းအကဲဖြတ်နေကြသည်။
ပုဂ္ဂလိကကားများနှင့်ကုန်တင်သဘောင်္များအပြင်ထူးခြားသောစိတ်ဝင်စားမှုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်လျှောက်လွှာတစ်ခုမှာဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘတ်စ်ကားများထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျာမနီ၊ ဆွီဒင်၊ ဗြိတိန် [၈၂၊ ၈၃]၊ ဂျပန်နှင့်ယူအက်စ်တို့အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘတ်စ်ကားများသည်သက်သေပြပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းပညာဖြစ်သည်။ လက်ရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်စျေးနှုန်းများ [82, 83] နှင့်အတူအောင်မြင်ရန်။
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအပြင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ရထားများ၊ သင်္ဘောများနှင့်လေယာဉ်များအတွက်အလားအလာရှိသောဖြေရှင်းနည်းကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်သုံးလောင်စာဆဲလ်များသည်နည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးအတားအဆီးများကြောင့်လျှပ်စစ်မီးရရန်ခက်ခဲသောခရီးသည်နှင့်ကုန်တင်ရထားလမ်းများအတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအဖြေဖြစ်သည်။ ဆီဖြည့်သည့်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဒီဇိုင်းသည်စနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအချိန်ဇယားနှင့်မျှော်မှန်းထားသောအကွာအဝေးကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်ဂရုတစိုက်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒေသတွင်းခရီးသည်တင်ရထားများအတွက်စီးပွားဖြစ်အသုံးချမှုများသည်ဂျာမနီ ၊ ယူကေ ၊ အီတလီ  နှင့်ပြင်သစ်တို့အပါအ ၀ င်ဥရောပနိုင်ငံအသီးသီးတွင်စိတ်ဝင်စားမှုတိုးပွားလာနေသည်။
အများအားဖြင့်အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်သို့မရောက်ဘဲသင်္ဘောပေါ်ရှိရေများဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်ရန်အမိုးနီးယားကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ the ကိုကာဗွန်နစ်ဖျက်သိမ်းရန်အလားအလာရှိသောဖြေရှင်းနည်းအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအဆိုပြုထားသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကာဗွန်နိမ့်အဖြေတစ်ခုအဖြစ်အကဲဖြတ်လျက်ရှိသော်လည်းမြင့်မားသောအမြင့်တွင်လည်ပတ်မှုသည်လုံခြုံရေးစံသတ်မှတ်ချက်နှင့်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော်လည်းအလွန်လိုအပ်သည်။ အဲယားဘတ်စ်သည် ၂၀၃၅ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်သုံးစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရန်ရည်မှန်းချက်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိပဏာမသဘောတရားများကိုသာတင်ပြနိုင်ခဲ့သည်။
၂.၃.၃ ။ အဆောက်အ ဦး များ
အချို့သောစီမံကိန်းများသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဇယားများတွင်ရောနှောခြင်း၊ သို့သော်အဆောက်အအုံ၏အပူပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားကာဗွန်နိမ့်နည်းပညာများဖြစ်သောအပူပန့်များ (RES မှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်း) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်အားသာချက်များရှိသည်။
စာရေးကိရိယာများအတွက်အသေးစားဘွိုင်လာများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဘွိုင်လာများ၊ ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်  နှင့်မိုက်ခရိုတာဘိုင်များအပါအ ၀ င်သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပမာဏများပြားလာခြင်းနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာများ၏အပြုအမူကိုအကဲဖြတ်ရန်အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်သုံးလူနေအိမ်ဘွိုင်လာများနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင့်ဆုံးသောအသုံးချမှုများကိုနယ်သာလန်နှင့်ယူကေတို့တွင်စမ်းသပ်လျက်ရှိသည်။
ယူကေသည်လက်ရှိစွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အအုံတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုပေါင်းစပ်ရန်အတွက်လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လူသိအများဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်မှာ H21 စီမံကိန်း  ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Leeds မွို့ရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ၁၀၀% သယ်ဆောင်ရန်လက်ရှိဓာတ်ငွေ့ဇယားကွက်ကိုပြောင်းလဲရန်နည်းပညာဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ယူကေအစိုးရသည်လက်ရှိအချိန်တွင်ပေါင် ၂၅ သန်းနှင့် Hy2016Heat စီမံကိန်းကိုထောက်ပံ့နေသည်။ ၄ င်းသည်“ နည်းပညာအရဖြစ်နိုင်လျှင်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (မီသိန်း) ကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုလူနေအိမ်နှင့်စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များတွင်အစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။ ။
အပြိုင်တစ်ပြိုင်တည်းတွင်အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်နည်းပညာအကန့်အသတ်များနှင့် (ကန့်သတ်ထားသည့်နေရာများအပါအ ၀ င်) အပူစွမ်းအင်ဖြင့် ၁၀၀% ဟိုက်ဒရိုဂျင်  ကိုလည်ပတ်နိုင်သောစီးပွားဖြစ်ဘွိုင်လာများအားအဆိုပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ အဆောက်အ ဦး များနှင့်အပူချိန်နိမ့်အပူပေးစနစ်များဆီသို့ ဦး တည်ပြောင်းလဲ။ အချို့သောသရုပ်ပြနေရာများသည်နည်းပညာကိုစမ်းသပ်ရန်တီထွင်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်လူနေအိမ်များအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုထောက်ပံ့ရန်ထိရောက်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများဖြန့်ကျက်ခြင်းသည်အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်နိုင်ပြီးတိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်အပူထက်စီးပွားရေးအားသာချက်မှာမထင်ရှားပေ။
အဆောက်အ ဦး များတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာလောင်စာဆဲလ်များ၏မြင့်မားသောလျှပ်စစ်စွမ်းအားကိုအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းခွင်တွင်းရှိစွမ်းအင် (CHP) အပင်များကိုစွမ်းအင်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောလေ့လာမှုများကအလွန်နိမ့်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခြားလောင်စာများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုမြင့်မားသောယူဆချက်အရ micro-CHP အတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုထုတ်ယူနိုင်သည့်အလားအလာအပေါ်အကောင်းမြင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်းလက်ရှိအခြေအနေ၌အဆောက်အအုံများတွင် micro-CHP အလားအလာနည်းပါးသည်။ အထူးသဖြင့်လူနေအိမ်ကဏ္naturalတွင်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ micro-CHP ပြသခဲ့သည့်အောင်မြင်မှုအနည်းငယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သုတေသီအချို့ကလောင်စာဆဲလ်များနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုစနစ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောအလွန်မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်များကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်း၊ photovoltaic (PV) တပ်ဆင်ထားသောအဆောက်အအုံများ၏နှစ်စဉ်ကိုယ်ပိုင်ဖူလုံရေးကိုအာမခံနိုင်ရန်ဒေသတွင်းဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်ရန်အဆိုပြုထားသည်။ ။
၂.၃.၄ ။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
နောက်ဆုံးကဏ္sectorsများတွင်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခြင်းအပြင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းအဖြစ်လည်းအသုံးပြုသည်။ လောင်စာဆဲလ်များသို့မဟုတ်အဆင်ပြေသောဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်များနှင့်ပေါင်းစပ်သံသရာများမှတဆင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားသည်များသောအားဖြင့်မြင့်မားသော်လည်း၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းအပါအဝင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုစဉ်းစားသောအခါစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုသည် ၇၀% အထိမြင့်နိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်သုညသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်စီးပွားရေးရေရှည်တည်တံ့နိုင်မှုကိုအာမခံနိုင်သော်လည်း၊ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ပင်နှစ်စဉ်လည်ပတ်ချိန်သည်အရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်များကိုတရားမျှတစေရန်လုံလောက်သောမြင့်မားသင့်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်စွမ်းအင်စနစ်ကိုအပြည့်အ ၀ ရောက်ရှိရန်ရေရှည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသိုလှောင်မှုသည်ရှောင်လွှဲမရနိုင်သည့်အပြင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ရရှိနိုင်သည့်ဖြေရှင်းနည်းအနည်းငယ်မှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်မှတစ်ဆင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသိုလှောင်မှု၏ပြည့်ပြည့် ၀၀ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ပိုမိုထိရောက်သောစွမ်းအင်ကူးပြောင်းမှုကိုထောက်ပံ့ရန်သုတေသနအတွက်နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလိုအပ်သည်။
တင်သွင်းထားသောဟိုက်ဒရိုဂျင်မှစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ရာသီဥတုဗျူဟာများသည်ဒေသတွင်းပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းရည်နိမ့်ကျသည့်ဒေသများအတွက်အများအားဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အဆိုပြုထားသည် [105, 106] အပိုဆောင်းအသုံးချမှုများသည်မိုင်းများ၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့များသို့မဟုတ်အာတိတ်ဒေသကဲ့သို့သောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းရည်နိမ့်သည့်ကျွန်းများကဲ့သို့ဝေးလံသောနေရာများသို့သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုသေချာစေရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များနှင့်ဆက်စပ်ဓာတ် လိုက်၍ ဆဲလ်များအသုံးပြုခြင်းကိုဝေးလံသောကျွန်းများသို့မဟုတ်သီးခြားမိုက်ခရို Grid များမှတင်သွင်းသောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများအပေါ်မှီခိုခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုအကဲဖြတ်ရန်လေ့လာမှုများစွာတွင်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အပေါ်အသစ်ပြန်လည်စိတ်ဝင်စားမှု [12, 111] ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလားအလာပထဝီနိုင်ငံရေးအကျိုးဆက်များအပေါ်အများအပြားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါပြီ။ နိုင်ငံများစွာသည်ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင်ရာသီဥတုရည်မှန်းချက်များပြည့်မီရန်နှင့်အပြည့်အဝကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းမှုများတွင်အပြာရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်နှစ်မျိုးလုံးကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်အသုံးပြုမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။ ၎င်း၏မြင့်မားသောအလားအလာနှင့်အသုံးချမှုများကြောင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်အဓိကပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပြissueနာဖြစ်လာနိုင်သည်။ ကာဗွန်နိမ့်အနာဂတ်တွင်စွမ်းအင်ပထဝီနိုင်ငံရေး၏ ပို၍ သက်ဆိုင်သောပြissueနာဖြစ်လာစေရန်နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသည်မျှော်လင့်ရသည်။ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချရေးကြိုးပမ်းမှုတွင်အဓိကကစားသမားများဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံများနှင့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများသည်နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုရရှိရန်ကတိကဝတ်ပြုထားကြသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှ“ တင်သွင်းသူများ” နှင့်“ တင်ပို့သူများ” အသစ်ပေါ်ထွက်လာမည်။ ဤအတောအတွင်းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများသည်စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပထဝီနိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုများကိုထေမိစေရန်အနာဂတ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီမံကိန်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုစဉ်းစားနေကြသည်။ ဤအပိုင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုအကျဉ်းချုပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ရန်၊ အဓိကအမျိုးသားဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာများကိုတင်ပြခြင်း၊ အလားအလာရှိသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါဝင်သူများ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများတွင်ပါ ၀ င်သူများ၏အခန်းကဏ္ and နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်များ
၃.၁ ။ အမျိုးသားမဟာဗျူဟာများ
နိုင်ငံများစွာသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာများနှင့်စျေးကွက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အမျိုးသားဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာများကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမဟာဗျူဟာများသည်နိုင်ငံများ၏မတူညီသောရည်မှန်းချက်နှင့်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များအပြင်“ တင်သွင်းသူများ” နှင့်“ တင်ပို့သူများ” အကြားဖြစ်နိုင်ခြေကွဲပြားမှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ မကြာသေးမီက IRENA စာတမ်း၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအမျိုးသားမဟာဗျူဟာများသည်ရှည်လျားသောလုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ဆုံးအဆင့်သာဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ နိုင်ငံများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာ၏အခြေခံများကိုနားလည်ရန်၊ ရေရှည် 'ရူပါရုံ' စာရွက်စာတမ်းသို့ရွှေ့ပြောင်းရန် R&D အစီအစဉ်များကိုအစပြုခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုမှာ 'လမ်းပြမြေပုံ' ဖြစ်ပြီးဟိုက်ဒရိုဂျင်၏အလားအလာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအကဲဖြတ်နိုင်ရန်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအစီအစဉ်ကိုသတ်မှတ်သည်။ လမ်းပြမြေပုံသည်သုတေသနareasရိယာများတွင်အမြင့်ဆုံး ဦး စားပေးရမည့်အချက်များအဖြစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြန့်ကျက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ကာလတိုနှင့်နှစ်လယ်ပိုင်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်သည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာမဟာဗျူဟာသည်ပစ်မှတ်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ တိကျသောမူဝါဒများကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လက်ရှိစွမ်းအင်မူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေးတွင်ရှေ့တန်းမှ ဦး ဆောင်သည်။ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလတွင်ဂျပန်သည်၎င်း၏ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ဂျပန်သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်လောင်စာဆဲလ်များအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်လမ်းပြမြေပုံကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့သည်။ လောလောဆယ်ဂျပန်သည်စွမ်းအင်တင်သွင်းမှုအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုနေသည်။ 2017 ခုနှစ်တွင်ဂျပန်သည်စတုတ္ထမြောက်ရေနံစိမ်းတင်သွင်းသူ၊ ထိပ်တန်း LNG တင်သွင်းသူနှင့်တတိယအကြီးဆုံးကျောက်မီးသွေးတင်သွင်းသူဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ဖူကူရှီးမားနျူကလီးယားမတော်တဆမှုအပြီးတွင်ဂျပန်နိုင်ငံ၏နျူကလီးယားအစီအစဉ်များပိတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းကဤအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ နျူကလီးယားမတော်တဆမှုအပြီးတွင်ဂျပန်စွမ်းအင်ရောနှောခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်တို့သည်နျူကလီးယားပိုင်ဆိုင်မှုကိုအစားထိုးရန်စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပမာဏကိုတိုးပွားစေသည်။ ဂျပန်သည်၎င်း၏နျူကလီးယားစက်ရုံများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများသည်ဂျပန်၏အဓိကစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု၏ ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်၎င်း၏ရာသီဥတုရည်မှန်းချက်များ (၂၀၅၀ တွင်ကာဗွန်ကြားနေရေးဝါဒ) ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အလားအလာရှိသောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးနိုင်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လောင်စာဆဲလ်သုတေသနအတွက်ဘတ်ဂျက်များစွာကိုလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များကအသုံးချခဲ့သော်လည်းစီးပွားဖြစ်အသုံးချမှုများကိုအမှန်တကယ်ဖြန့်ကျက်ရန်အနည်းငယ်သာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်၏အခြားအဆင့်များကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းပါးသောကြောင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုနိမ့်ကျသည်။ ဂျပန်၏သွင်းကုန်မှီခိုမှု (တိုင်းပြည်ကရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လိုအပ်မှုအားလုံးကိုတင်သွင်းနေသည်) သည်၎င်း၏ဟိုက်ဒရိုဂျင်အများစုကိုတင်သွင်းရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ ဂျပန်သည်တိကျသောဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းကို၎င်း၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုအားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမကြေညာခဲ့ပေ။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်တရုတ်သည် ၂၀၆၀ တွင်ကာဗွန်ကြားနေရေးကိုရောက်ရှိရန်အစီအစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဤကြိုးပမ်းမှုတွင်နျူကလီးယားသည်တရုတ်စွမ်းအင်ရောနှောခြင်းနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်သည်။ လက်ရှိတွင်တရုတ်နိုင်ငံသည်နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုအသစ် ၅၀ ကျော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စီစဉ်ခြင်းပြုလုပ်သည်။ နျူကလီးယားကဏ္ sector သည်မြင့်မားသောစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်နှင့်သန့်ရှင်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်နောက်ထပ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
လက်ရှိတွင်တရုတ်သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့ထုတ်လုပ်မှု၏သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးနှင့်တစ်နှစ်လျှင်တန်သန်းသန်း ၂၀ ကျော်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူတရုတ်၏ဟိုက်ဒရိုဂျင်အများစုမှာကျောက်မီးသွေးမှဖြစ်သည်။ China Hydrogen Alliance မှ ၂၀၃၀ တွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင် ၀ ယ်လိုအားတန်ချိန် ၃၅ သန်းတိုးရန်နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ပြည်တွင်းလိုအပ်မှုစုစုပေါင်း၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိရန်ခန့်မှန်းထားသည်။ ၂၀၄၀ ခုနှစ်တွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လိုအပ်မှုမှာတန်ချိန် ၄၅ သန်းအထိတိုးမြင့်ရန်မျှော်မှန်းထားပြီး (အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပမာဏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် ၂၀၅၀ မှသန်း ၆၀ တန်အထိ (အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း) တိုးလာရန်မျှော်လင့်ထားသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာကိုစတင်သောအခြားအာရှနိုင်ငံသည်တောင်ကိုရီးယားဖြစ်သည်။ 2019 အစတွင်တောင်ကိုရီးယားက၎င်း၏ Hydrogen Economy Roadmap ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ဦး စားပေးမှုများမှာကားများအတွက်လောင်စာဆဲလ်များနှင့်စွမ်းအင်အတွက်အကြီးစားစာရေးကိရိယာများအတွက်လောင်စာဆဲလ်များတွင် ဦး ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ၂၀၄၀ တွင် FCEV ၆ ဒသမ ၂ သန်းထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းတွင်ယူနစ် ၂.၉ သန်းကိုပြည်တွင်းစျေးကွက်သို့တင်ပို့ရန်နှင့် ၃.၃ သန်းကိုတင်ပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လမ်းပြမြေပုံသည် ၂၀၄၀ ပြည့်နှစ်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်လောင်စာဆဲလ် ၁၅ GW ကိုတင်ပို့ရန် ၇ GW အပါအ ၀ င်လောင်စာဆဲလ် ၁၅ လုံးကိုထောက်ပံ့ပေးရန်ဖော်ပြထားသည်။
ဥရောပတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ဥရောပနှင့်အမျိုးသားအဆင့်တွင်အထူးစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဥရောပသမဂ္ဂသည်၎င်း၏ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ EU မဟာဗျူဟာသည်အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုဥရောပ၏ထိပ်တန်း ဦး စားပေးအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အပြာဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်အလယ်အလတ်ကာလအတွက်ယာယီဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်အီးယူသည် ၄၀ GW ဟိုက်ဒရိုဂျင်လျှပ်ကာလီဇာစွမ်းအင်ကိုမြင်နိုင်ရန်ရည်မှန်းထားသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဖြစ်သောတရုတ်နိုင်ငံ၏ဂေါ်ဂက်စ်ဆည်၏စွမ်းရည်ထက်နှစ်ဆနီးပါးရှိသည်။ ဤရည်မှန်းချက်ပြည့်မီရန်အတွက်အီးယူသည် ၂၀၅၀ တွင်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ယူရို ၄၇၀ ဘီလီယံအထိမျှော်မှန်းထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ထိုကာလအတွင်းပင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှအရှေ့နှင့်တောင်ပိုင်းမှ ၄၀ GW ထပ်တိုး။ တင်သွင်းမှုထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကြေငြာခဲ့သည် ( ဆိုလိုသည်မှာယူကရိန်းနှင့်မြောက်အာဖရိကနိုင်ငံများဖြစ်သည်။
တစ်ပြိုင်တည်းမှာပင်ဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့အနက်စပိန်၊ ဂျာမနီနှင့်ပြင်သစ်တို့သည် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၄ ဒသမ ၅၊ ၆ နှင့် ၆.၅ GW အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုတပ်ဆင်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ ပေါ်တူဂီ၊ နယ်သာလန်နှင့်စပိန်တို့၏အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အမျိုးသားရည်မှန်းချက်များသည် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင်အီးယူ၏ ၄၀ GW တပ်ဆင်ထားသော Electrolyzer စွမ်းဆောင်ရည်၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုကြေငြာခဲ့သည်။ COVID-4 နှင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအပြီးတွင်အစိုးရများသည်ရာသီဥတုရည်မှန်းချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်စဉ်စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူလာစေရန်စွမ်းအင်အဖြစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သို့ရန်ပုံငွေများကိုခွဲဝေချထားရန်စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
မတူညီသောဟိုက်ဒရိုဂျင်တင်သွင်းသူများသည်မတူညီသောဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာများပေါ်တွင်မှီခိုကြသည်။ ဥရောပသည်အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သော်လည်းအာရှစျေးကွက်များ (တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နှင့်တရုတ်) သည်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်များတွင်ပိုမိုကွဲပြားသောမီးခိုးရောင် - အစိမ်းရောင်မဟာဗျူဟာရှိသည်။
ထင်ရှားသောသာဓကတစ်ခုမှာသြစတြေးလျသည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတင်ပို့သူဖြစ်လာရန်ရည်ရွယ်သည့်စီမံကိန်းများစွာကိုတီထွင်နေသည်။ ၎င်း၏ပထဝီအနေအထားနှင့်ကြီးမားသောအရင်းအမြစ်များရရှိနိုင်သောကြောင့်သြစတြေးလျသည်အာရှဈေးကွက်များအထူးသဖြင့်ဂျပန်နှင့်ကိုရီးယားသို့သန့်ရှင်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်သြစတြေးလျစွမ်းအင်နှင့်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေး ၀ န်ကြီးသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုတစ်ကီလိုလျှင် ၂ ဒေါ်လာအောက် (သို့တစ်ကီလိုလျှင် ၁.၅ အမေရိကန်ဒေါ်လာ) သို့လျှော့ချရန်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသော“ H2020 under 2” ရည်မှန်းချက်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဤစိန်ခေါ်မှုရည်မှန်းချက်သည်စက်မှုမဟာဗျူဟာများနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့်ညှိနှိုင်းထောက်ခံသည့်မူဝါဒများလိုအပ်သည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိက (MENA) ဒေသမှအဓိကရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သူများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီမံကိန်းများနှင့်စီမံကိန်းများကိုပိုမိုအကဲဖြတ်နေကြသည်။ ဤနိုင်ငံများသည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများပေါ်တွင်အခြေခံထားသောလက်ရှိကမ္ဘာ့စွမ်းအင်စနစ်၏အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ - အထူးသဖြင့်ရေနံသည်အဓိကအစိုးရဖြစ်ပြီး၎င်းနိုင်ငံများစွာအတွက်တင်ပို့မှုမှရရှိသောအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာ၏စွမ်းအင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုသည် RES ၏မြင့်မားသောအခန်းကဏ္ with နှင့်အတူသူတို့၏တည်ငြိမ်မှုကိုခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ဤနိုင်ငံများသည်အနုတ်လက္ခဏာရှိသောမက်ခရိုစီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများကိုထေမိစေရန်နှင့်အနာဂတ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရှိအနာဂတ်တွင်ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခန်းကဏ္reducedကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်းများကိုစဉ်းစားနေကြသည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့် CCS အလားအလာရှိသောကြောင့် MENA ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သူများသည်အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံများအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အလားအလာကောင်းများရှိသော်လည်း MENA နိုင်ငံများ၏ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရည်မှန်းချက်သည်ဒေသတွင်းရေရှားပါးမှုကြောင့်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် MENA ရေဖိအားပိုမိုဆိုးရွားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ၎င်းတို့၏ရေလိုငွေပြမှုကိုဖြေရှင်းရန် MENA နိုင်ငံများသည် Neom ကဲ့သို့ပင်ရေဆိုးရေဖြန်းခြင်းအစီအစဉ်များနှင့်အတူဟိုက်ဒရိုဂျင်စီမံကိန်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် MENA ၏တဖြည်းဖြည်းသန့်စင်မှုစွမ်းရည်ကိုပိုမိုဖွံ့ဖြိုးစေပြီးလက်ရှိတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေဖြန့်ဖြူးမှုစွမ်းရည်၏ထက်ဝက်နီးပါးရှိသည်။
ယနေ့အချိန်၌ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံမှဟိုက်ဒရိုဂျင်စီမံကိန်းများဖြစ်သော Saudi Arabia၊ United Arab Emirates (UAE) နှင့် Oman တို့ကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် Air Products, Saudi ACWA နှင့် Neom တို့သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့်လေစွမ်းအင်ဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အစိမ်းရောင်အမိုးနီးယားစက်ရုံ (ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသော) အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖက်စပ်သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ စီမံကိန်းကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်စတင်သင့်သည်။ စက်ရုံသည်နေရောင်ခြည်နှင့်လေတို့မှပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် 2020 GW ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားကိုထိပ်တန်းအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တင်ပို့သူအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သော်လည်းစီမံကိန်းသည်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အစီအစဉ်ကိုစွမ်းအားပေးနိုင်မည့်ကြေငြာထားသောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းရည်သည်သိသာထင်ရှားသည်။
ထို့အပြင်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏မက်ခရိုစီးပွားရေးနှင့် ၂၀၂၀ တွင်ရေနံစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့်ဘဏ္financialာရေးအဟန့်အတားများရှိသော်လည်းစီမံကိန်းအတွက်အဓိကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုလိုအပ်သည်။
ယူအေအီးသည်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ရင်းမြစ်သစ်များထုတ်လုပ်ရန်အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီမံကိန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသည်။ ယူအေအီးသည်၎င်း၏တရားဝင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းပြမြေပုံကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသော်လည်းအစိုးရပိုင်ဒူဘိုင်းလျှပ်စစ်နှင့်ရေအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (DEWA) သည်စိမ်းလန်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ရွေ့လျားမှုစီမံကိန်းကို Mohammed bin Rashid Al Maktoum နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏အားသာချက်ကိုရယူပြီးကတိပြုသည်။ ပန်းခြံ။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဥယျာဉ်သည် ၂၀၃၀ တွင်တပ်ဆင်ထားသောစွမ်းရည် ၅ GW ရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ယူအေအီးမှနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်မှယှဉ်ပြိုင်သောစျေးနှုန်းများသည်စိမ်းလန်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်စျေးနှုန်းများကိုလျှော့ချရန်စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရည်မှန်းချက်များရှိသော်လည်းယူအေအီးသည် ၄ ​​င်း၏ CCUS အလားအလာကိုအပြည့်အဝအသုံးချသည့်အပြာဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုကြည့်နေသည်။
အိုမန်သည်အိမ်သုံးဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအသုံးပြုရန်အလားအလာကိုလေ့လာနေသောတတိယမြောက်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အိုမန်ဟာကြီးမားတဲ့ပို့ကုန်ကိုအာရုံစိုက်တဲ့ရေနံချက်စက်ရုံနဲ့ရေနံဓာတုစက်ရုံကိုတည်ဆောက်နေတဲ့ Duqm ဆိပ်ကမ်းမှာအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စက်ရုံတစ်ရုံဆောက်လုပ်မယ်လို့ကြေငြာခဲ့တယ်။ Hyport Duqm စက်ရုံသည်ပထမအဆင့်မှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက် ၂၅၀ မှ ၅၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ အစိုးရပိုင်ရေနံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအိုမန်သည်အာရှနိုင်ငံများမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ အထူးသဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံသည်အနာဂတ်တွင်ထုတ်လုပ်မှု၏အချို့သောအပိုင်းကိုအာရှသို့တင်ပို့ရန်ရည်ရွယ်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုသည်။ အိုမန်လာမည့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာကိုကြေငြာခဲ့သည်။
အရေးပါသောဟိုက်ဒရိုဂျင်တင်ပို့သူဖြစ်လာရန်စီစဉ်ထားသော MENA နိုင်ငံသည်မော်ရိုကိုဖြစ်သည်။ မော်ရိုကိုတွင်မည်သည့်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ဓာတ်ငွေ့ကိုမျှထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်၎င်း၏နေနှင့်လေစွမ်းအင်ကိုကြီးမားစွာအသုံးချရန်ကြိုးပမ်းသည်။ မော်ရိုကိုသည်သွင်းကုန်မှီခိုမှုလျော့နည်းစေရန်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် (လေ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV နှင့်စုပေါင်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်) တွင်အရေးကြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၃၀ တွင်နိုင်ငံသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များမှထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ထားသောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ၁၁ GW နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ရည်မှန်းချက်မှာမော်ရိုကို၏အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုပြည်တွင်းစျေးကွက်သို့တင်ပို့ရန်နှင့်သုံးပုံနှစ်ပုံကိုတင်ပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကြီးမားသောနေနှင့်လေအရင်းအမြစ်များနှင့်ဥရောပနှင့်နီးကပ်မှုတို့ကြောင့်မော်ရိုကိုသည်ဥရောပအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ပုဒ်မ ၃.၃ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဂျာမနီနှင့်နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးသည်အနာဂတ်ပထဝီနိုင်ငံရေးရှုခင်း၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥရောပ၏ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှရုရှားသည်၎င်း၏အဓိကဝင်ငွေနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့တင်ပို့မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အလားအလာရှိသောဟိုက်ဒရိုဂျင်စီမံကိန်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်နောက်ထပ်အဓိကရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့တင်ပို့သူဖြစ်သည် ရုရှားသည်၎င်း၏အဓိကသဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်များမှဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေးတွင်အဓိကကစားသမားဖြစ်လာနိုင်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ရုရှားစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီး Pavel Sorokin သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင်တစ်နှစ်လျှင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တန်ချိန် ၂၀၀,၀၀၀ တင်ပို့ရန်အစိုးရမူဝါဒအသစ်ကိုပြသခဲ့ပြီး ၂၀၃၅ ခုနှစ်တွင်တန်ချိန် ၂ သန်းအထိတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ရုရှားသည်၎င်း၏နျူကလီးယားစွမ်းအင်မှဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်။ ၎င်း၏သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်နျူကလီးယားအလားအလာများအပြင်ရေချိုများနှင့်ဥရောပနှင့်အာရှအကြားရှိပထဝီမဟာဗျူဟာတည်ရှိမှုသည်ရုရှားနိုင်ငံကို ဦး ဆောင်နေသောဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်အဖြစ်ထပ်မံအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ထို့အပြင်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တင်ပို့သူများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပေါ်ထွက်လာလျက်ရှိသည်။ ချီလီကသူတို့ထဲကတစ်ယောက်ပါ။ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးပြီးဖြစ်သောတောင်အမေရိကနိုင်ငံသည် ၂၀၅၀ တွင်အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တန်ချိန် ၂၅ သန်းထုတ်လုပ်ပြီးအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုတင်ပို့နိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်။ သန့်စင်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်တင်ပို့မှုသည်သိသာသောဝင်ငွေများကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀ ဘီလီယံကျော်ရရှိနိုင်သည်။ [စာမျက်နှာ ၁၁ ပါရုပ်ပုံ] ပထဝီအနေအထားအရချီလီသည်မြောက်အမေရိကနှင့်အနောက်ဥရောပအပြင်အာရှဈေးကွက်များ (ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နှင့်အလားအလာရှိသောတရုတ်နိုင်ငံများ) သို့သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်များပေးပို့ခြင်းဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်သွယ်ရေးတွင်အဓိကကစားသမားဖြစ်လာနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အမျိုးသားဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာများသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခန်းကဏ္roleကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ပြည်တွင်းစားသုံးမှုနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲထုတ်လုပ်နိုင်သောအလားအလာသည်ပုံ (၅) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအနာဂတ် 'တင်သွင်းသူများ' နှင့် 'တင်ပို့သူများ' ကိုသတ်မှတ်မည့်အဓိကအချက်များသာဖြစ်သည်။
ပုံ5။ ရွေးချယ်ထားသည့်နိုင်ငံများ၏အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိမ်တွင်းသုံးစွဲမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအလားအလာအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ထားသောနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ GCC ဆိုသည်မှာပင်လယ်အော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီ (ဘာရိန်း၊ ကူဝိတ်၊ အိုမန်၊ ကာတာ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ယူအေအီး) ။ ရင်းမြစ်:  ။
၃.၂ ။ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ၏အခန်းကဏ္။
ပထမ ဦး စွာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေနံကုမ္ပဏီများ (IOCs) သည်သူတို့၏ရာသီဥတုဆိုင်ရာကတိက ၀ တ်များနှင့်နိုင်ငံရေးဖိအားများကြောင့်အလားအလာရှိသောဟိုက်ဒရိုဂျင်စီမံကိန်းများကိုစတင်စဉ်းစားလာသည်။ IOC များအကြားယေဘုယျလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများအကြားကွဲပြားမှုများပြားလာခြင်း။ ဥရောပအိုင်အိုစီများသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များတွင်ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာကြသော်လည်းအမေရိကန်အိုင်အိုစီများသည်ရိုးရာကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆက်လက်အာရုံစိုက်နေကြသည်။
၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် NortH2020 ကို Shell, Gasunie နှင့် Groningen Seaports တို့ပါဝင်သောလုပ်ငန်းစုတစ်ခုမှစတင်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းသည်မြောက်ပင်လယ်ရှိအကြီးစားကမ်းလွန်လုပ်ငန်းမှထုတ်လုပ်သောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၂၀၂၀ တွင် ၁ GW၊ ၂၀၃၀ တွင် ၄ GW ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၄၀ တွင် ၁၀ GW အထိတိုးတက်ရန်ရည်မှန်းချက်ရှိသည်။ ၂၀၂၁ တွင်ဒီဇင်ဘာလတွင်မိတ်ဖက်သစ်များဖြစ်လာသည့် Equinor နှင့် RWE တို့၏ပံ့ပိုးမှုရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများစတင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်စီမံကိန်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုတစ်ခုပြီးမြောက်လိမ့်မည်။
၂၀၂၀ နို ၀ င်ဘာလတွင် BP သည် strsted နှင့်အတူလက်ငင်းအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် Lingen Green Hydrogen ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤစီမံကိန်းအရကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည်ကန ဦး 2020 MW Electrolyzer နှင့်ဆက်စပ်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုဂျာမနီအနောက်မြောက်ဂျာမနီရှိ BP's Lingen Refinery တွင်တည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းကိုမြောက်ပင်လယ်ရှိ strsted offshore wind farm မှထုတ်လုပ်သောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြင့်စွမ်းအင်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားသောဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်သန့်စင်စက်ရုံတွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၂ အစောပိုင်းတွင် BP နှင့်Ørstedတို့သည်နောက်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက် (FID) ပြုလုပ်ရန်အစီအစဉ်ရှိပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင်စီမံကိန်းကိုစတင်လည်ပတ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
စပိန်၏အကြီးဆုံးစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Repsol သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးမြှင့်နေသည်။ ၎င်းသည်စပိန်နိုင်ငံရှိစက်ရုံတစ်ရုံတည်ဆောက်ရန်အတွက်ယူရိုသန်း ၆၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်ပြီးအနီးရှိ Petronor သန့်စင်စက်ရုံရှိလေစွမ်းအင်မှလေစွမ်းအင်မှအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို CCS နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ultralow-ထုတ်လွှတ်မှုလောင်စာများထုတ်လုပ်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည်အထူးသဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုတွန်းအားပေးနေကြသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာအီတလီနိုင်ငံမှ Enel ဖြစ်ပြီးချီလီတွင်အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်စီမံကိန်းကိုတည်ဆောက်ရန်စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းကိုလေစွမ်းအင်ဖြင့်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စပိန်နိုင်ငံမှ Iberdrola၊ US NextEra နှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံမှ Uniper တို့ကဲ့သို့သောအဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီမံကိန်းများကိုစတင်ခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်တင်းရေးနှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးအဆောင်များသည်ပိုမိုတိုးပွားလာလျက်ရှိသည်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၏အဓိကစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သူများအနေနှင့်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္enhanceကိုမြှင့်တင်ရန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်၎င်းတို့အားထပ်မံဖြည့်တင်းပေးသည်။
တတိယအချက်အနေဖြင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကွန်ယက်အော်ပရေတာသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များကြီးထွားလာခြင်းကြောင့် ၀ င်ငွေနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျှော့ချခြင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ရာသီဥတုအားထုတ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ရရှိစေသည်။ ဓာတ်ငွေ့ဇယားကွက်မှအော်ပရေတာများသည်လက်ရှိဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအသုံးပြုရန်အခက်အခဲအချို့ရှိသော်လည်းဥရောပဂတ်စ်ကွန်ယက်မှအော်ပရေတာများသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လတွင် (ဥရောပဟိုက်ဒရိုဂျင်ကျောရိုး) ဟုခေါ်သောအစီအစဉ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်။ ၂၀၃၀ တွင် ၆၈၀၀ ကီလိုမီတာရှိကန ဦး ပိုက်လိုင်းကိုရွေးချယ်ထားသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်ကန့်သတ်ထားပြီး ၂၀၄၀ တွင်ထိုကွန်ယက်သည် ၂၃၀၀၀ ကီလိုမီတာအထိကျယ်ဝန်းပြီးတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
အီတလီရှိ Snam ကဲ့သို့ဓာတ်ငွေ့ဇယားကွက်သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုသူတို့၏အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်အတူကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသောင်တင်နေသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုလောင်းကစားနေသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Snam သည်လာမည့်လေးနှစ်တာကာလအတွင်းယူရို ၇.၄ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အစီအစဉ်ကိုကတိပြုခဲ့သည်။ Snam သည်ထိုစုစုပေါင်း၏ ၅၀ ရာနှုန်းကို“ ဟိုက်ဒရိုဂျင် - အဆင်သင့်” အခြေခံအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ရန်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်များအားဟိုက်ဒရိုဂျင် - အဆင်သင့်သောစံနှုန်းများဖြင့်အစားထိုးခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်မှန်းထားသည်။ Snam ကအီတလီသည်ဥရောပစျေးကွက်များအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အချက်အချာဖြစ်လာရန်နေရာကောင်းရှိပြီးမြောက်အာဖရိကနိုင်ငံများမှအစိမ်းနှင့်အပြာဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုတင်သွင်းသည်။
တတ်နိုင်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အဓိကစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် ထို့ကြောင့်ကဏ္ numerous အသီးသီးမှကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏အားထုတ်မှုများကိုစတင်ညှိနှိုင်းကြသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာစပိန်နိုင်ငံမှ Iberdrola၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ Orsted၊ အီတလီမှ Snam၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ACWA, CWP Renewables နှင့် Yara တို့မှကုမ္ပဏီခုနစ်ခုကတည်ထောင်ခဲ့သော Green Hydrogen Catapult အစပျိုးမှုဖြစ်သည်။ Green Hydrogen Catapult သည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အခြေခံသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၏ ၂၅ GW အထိတိုးမြှင့်ရန်နှင့်လက်ရှိထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ / ကီလိုဂရမ်အောက်သို့ထက်ဝက်လျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်။ ထိုရည်မှန်းချက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၀ ဘီလီယံခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။
၃.၃ ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များ
ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်အနာဂတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကုန်သွယ်မှုကိုပြန်လည်ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ အမှန်မှာ၊ အမျိုးသားဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာများနှင့်အပြိုင်၊ အချို့သောနိုင်ငံများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လိုအပ်မှုမြင့်မားသောနိုင်ငံများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအလားအလာမြင့်မားသောနိုင်ငံများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောနှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်များချမှတ်ပြီးဖြစ်သည်။ အလားအလာရှိသည့်တင်သွင်းသူများအနက်ဂျာမနီသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံး ၁၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ထုတ်လုပ်သည့်စီမံကိန်းနှင့်အတူနိုင်ငံအတွင်းရှိအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်မော်ရိုကိုနှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်သည်။
၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာလတွင်၊ ဂျာမနီသည်သြစတြေးလျနှင့်သြစတြေးလျရှိနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့်အတူဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုတင်သွင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်ရည်ရွယ်သည့်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်ကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အလားအလာရှိသောတင်ပို့သူများအနက်Australiaစတြေးလျသည်ရှေ့တန်းပြေးသူဖြစ်သည်။ ဂျာမနီနှင့်မကြာသေးမီကသဘောတူထားသည့်အတိုင်းသြစတြေးလျသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တင်ပို့မှုတို့တွင်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်ရည်မှန်းချက်တွင်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသြစတြေးလျသည်၎င်း၏ဟိုက်ဒရိုဂျင်အားလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသောအာရှစွမ်းအင်စျေးကွက်များသို့တင်ပို့ရန်ရှာဖွေနေသည်။ ဂျာမနီနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းသည်သြစတြေးလျသည်ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့်စင်္ကာပူတို့ကဲ့သို့အခြားနိုင်ငံများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ စက်တင်ဘာတွင်ဆော်ဒီအာရေဗျမှဂျပန်သို့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးအပြာရောင်အမိုးနီးယားအမိုးနီးယားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အနာဂတ်တွင်အမိုးနီးယားကုန်သွယ်ရေးအားစွမ်းအင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အရေးကြီးသောမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဂျပန်သို့တင်ပို့သည့်ပထမ ဦး ဆုံး 2020 t တန်သောအမိုးနီးယားကုန်ကြမ်းကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကာဗွန်ကြားနေရေးရရှိရန်ကြိုးပမ်းမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဂျပန်၏အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရာတွင်အမိုးနီးယားသည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်မည်ဟုဂျပန်ကကြေငြာခဲ့သည်။
ကမ္ဘာအနှံ့တွင်အနာဂတ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်အရှိန်အဟုန်ရှိသည်။ ဤစာတမ်းသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာအပေါ် အခြေခံ၍ စွမ်းအင်စနစ်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်စိမ်းလန်းသောသို့မဟုတ်အပြာလမ်းကြောင်းများ၊ ၎င်း၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သိုလှောင်မှုနှင့်ကဏ္ sectors အသီးသီးမှနောက်ဆုံးအသုံးပြုခြင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောစျေးကွက်နှင့်ပထဝီနိုင်ငံရေးအမြင်များကိုအဓိကတင်ပြထားသည်။
အနာဂတ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေး၏အောင်မြင်မှုသည်စိတ်ဝင်စားသူများကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်အားအပြိုင်အဆိုင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်လက်ရှိနည်းပညာများကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ရှုထောင့်မျိုးစုံကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲလက်ရှိစွမ်းအင်စနစ်အားကာဗွန်နည်းသောအခြားနည်းလမ်းများသို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ကျယ်ပြန့်သောရုပ်ပုံလွှာ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်အနာဂတ်မဟာဗျူဟာများသည်အခြားဖြေရှင်းချက်များနှင့်ကောင်းစွာပေါင်းစပ်ရန်အရေးကြီးသည်။
ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်အနိမ့်ကာဗွန်စွမ်းအင်စနစ်အားထောက်ပံ့ရန်အဖြေနှစ်ခုလုံး၏အလားအလာရှိသောပံ့ပိုးမှုများကိုစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်အစိမ်းနှင့်အပြာဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကိုဖြေရှင်းသင့်သည်။ နိုင်ငံအများစုတွင်စွမ်းအင်စွမ်းအင်တိုးချဲ့ခြင်းသည်ကာဗွန်နိမ့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လိုအပ်ချက်ကိုထောက်ပံ့ရန်လုံလောက်မည်မဟုတ်ပါ။ အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းဤကွာဟချက်ကိုဖြည့်ရန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အပြာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်၎င်း၏တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ နည်းပညာအများစုသည်ဟိုက်ဒြိုဂျင်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်၏အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်ရင့်ကျက်နေပြီဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏ရှုပ်ထွေးမှုသည်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များစွာကြောင့်၎င်း၏ရှုပ်ထွေးမှုသည်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနည်းပါးသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှုနှင့်လိုအပ်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်မှုနှစ်ခုစလုံးသည်အဓိကစိန်ခေါ်မှုများကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကတွေ့ရှိရသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအကန့်အသတ်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေသောနည်းဗျူဟာများချမှတ်ခြင်းတွင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အတွက်လက်ခံနိုင်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုရောက်ရှိရန်အဓိကကျသည့်အချက်နှစ်ချက်မှာအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူဟိုက်ဒရိုဂျင်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်၏ရှုပ်ထွေးမှုကဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်အဖိုးတန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်သည်၊ အရင်းအမြစ်ကိုအခြားနည်းလမ်းများဖြင့်အစားထိုးရန်ဖြစ်နိုင်ချေနိမ့်လေ၊ ၎င်းသည်စျေးနှုန်းမြင့်လေလေဖြစ်သည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြproblemနာဖြစ်သောကြောင့် GHG ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအပြည့်အဝအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်တွက်ချက်ရန်ထိရောက်သောမဟာဗျူဟာသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များကိုလိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မျှော်မှန်းထားသောသက်ရောက်မှုများ၊ စဉ်းစားသည့်နည်းပညာများ၊ စနစ်နယ်နိမိတ်များ (စနစ်လည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်ဘဝသံသရာအကဲဖြတ်မှုများအပါအ ၀ င်) နှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းသောစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပစ်မှတ်များကိုသတ်မှတ်ရန်အရေးကြီးသည်။ အနိမ့်ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သတ်မှတ်။ နိုင်ငံများအကြားရှင်းလင်းသောညှိနှိုင်းမှုမရှိပါကကွဲပြားသောရူပါရုံများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်တူကျ။ ဖြစ်နိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များကိုအကောင်းဆုံးဖြန့်ကျက်မှုဆီသို့ ဦး တည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်လက်တွေ့ကျကျအချိန်ဇယားနှင့်အလယ်အလတ်ပစ်မှတ်များကိုအလေးအနက်တင်ပြခြင်းမရှိဘဲနောက်ဆုံးပစ်မှတ်များချမှတ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မူဝါဒများနှင့်လမ်းပြမြေပုံများသည်မသေချာမရေရာမှုများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပြီးအသိပညာနှင့်လက်တွေ့အသစ်များနှင့်ပုံမှန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမြေပုံအသစ်တစ်ခုဆွဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပထဝီနိုင်ငံရေးတွင်နိုင်ငံများအနေဖြင့်ရောင်းလိုအား၊ ဝယ်လိုအားနှင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားမှုတို့ကဲ့သို့သောစွမ်းအင်ဆိုင်ရာပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ပထဝီနိုင်ငံရေးသည်အရင်းအမြစ်ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူနည်းပညာဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများကိုပိုမိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလာလိမ့်မည်။ လက်ရှိရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဓိကထုတ်လုပ်သူများသည် RES နှင့်အတူအခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ ((နှင့်အကျိုးဆက်မှရရှိသော ၀ င်ငွေများ) ကိုထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်ရရှိရန်အတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံပြီးစိတ်ချရသောဟိုက်ဒရိုဂျင်တင်ပို့သူများအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ အချို့သောနိုင်ငံများသို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင် (အစိမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်အပြာ) များကို၎င်းတို့၏ရာသီဥတုရည်မှန်းချက်များပြည့်မီရန်ပြည်တွင်း၌ ၄ င်းတို့၏ဟိုက်ဒြိုဂျင်လိုအပ်ချက်အချို့ကိုထုတ်လုပ်ရန်တင်သွင်းရမည်။
နိုင်ငံတကာဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်သွယ်မှုကထွန်းသစ်စထွက်လာသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်အချို့သောဒေသများမှထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျှော့ချရန်နှင့်အချို့သောဒေသများတွင်ခက်ခဲသောနိမ့်ကျသောကဏ္sectorsများကိုလျှော့ချရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သော်လည်းနိုင်ငံအားလုံးသည်၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများအားသန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သင့်ကြောင်းမမေ့သင့်ပါ။ ထို့ကြောင့်အစိုးရနှင့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များနှင့်ဒေသတွင်းစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုတင်ပို့သည့်အခြေအနေကိုကာကွယ်ရန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကမောင်းနှင်အားမှာစွမ်းအင်စနစ်၏ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သော်လည်းမကြာခဏသတိမမူမိသည့်ထပ်ဆောင်းသက်ရောက်မှုများ၊ ရေချိုနှင့်စိမ်းပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှစ်မျိုးလုံးထုတ်လုပ်ရန်ရေချိုလိုအပ်ချက်အပါအ ၀ င်၊ အမှန်မှာ၊ ရေချိုစွန့်ပစ်ခြင်းသို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ရေပြန်သုံးခြင်းကဲ့သို့သောအချို့သောဖြေရှင်းနည်းများသည်ဤအရေးကြီးသောပြissueနာကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီနိုင်သော်လည်းဒေသဆိုင်ရာဂေဟစနစ်အပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားအသုံးပြုမှုများအတွက်ရေချိုရရှိမှုကိုကန့်သတ်ရန်အတွက်ပြည့်စုံသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလိုအပ်သည်။
စာရေးသူများအနေဖြင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်ရည်ရွယ်သောအခြားနည်းပညာများနည်းတူကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လမ်းကြောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှုထောင့်အပေါ် အခြေခံ၍ ရှင်းလင်းသောရူပါရုံများဖြင့်ထောက်ခံသင့်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွာဟချက်ကိုကျယ်ပြန့်စေပြီးလက်ရှိမညီမျှမှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည့်အတွက်အမျိုးသားမဟာဗျူဟာများသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပုံရိပ်ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအာရုံမစိုက်ဘဲအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိနိုင်သည်။ ဤသို့ကွဲပြားသောကမ္ဘာတွင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုကန့်သတ်ရန်လိုအပ်သည့်စိန်ခေါ်မှုပန်းတိုင်များကိုရောက်ရှိခြင်းသည် ပို၍ ပင်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
MN, PPR, RS နှင့် MH တို့သည်လေ့လာမှုကိုအတူတကွသဘောတူနားလည်ကြပြီးလုပ်ငန်းကဏ္ of အားလုံးအတွက်ဒီဂရီအမျိုးမျိုးမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ MN သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္onအတွက် ဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီးပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကဏ္PRတွင် PPR သည်အဓိကဖြစ်သည်။ MN, PPR, RS နှင့် MH တို့သည်နောက်ဆုံးစာတမ်းကိုရေးသားခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတို့တွင်အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ စာရေးသူအားလုံးသည်ထုတ်ဝေထားသောလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သည်
CHP - ပေါင်းစပ်ထားသောအပူနှင့်စွမ်းအင်
သံ၏ DRI- တိုက်ရိုက်လျှော့ချရေး
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဘေဆယ်လ်မှ MDPI မှဤဆောင်းပါးကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၎င်းနှင့်အညီပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည် Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives ၄.၀ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်သူ့လိုင်စင်။ သင်သည်မူရင်းဆောင်းပါးကိုဖတ်နိုင်သည် ဒီမှာ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောအမြင်များသည် WorldRef မဟုတ်ဘဲစာရေးသူတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်သည်။
ပြန်လည်ထုတ်ဝေသည် : Kuldeep Singh က Aks
1. Chaube, A ။ ; ချပ်မန်းအေ။ ; Shigetomi, Y ကို။ ; ဟတ် K ကို။ ; Stubbins, J. ရေရှည်ဂျပန်စွမ်းအင်စနစ်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရေးအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏အခန်းကဏ္။ စွမ်းအင် 2020, 13, 4539. [Google Scholar] [CrossRef]
၂။ ဂျာမန်ဖက်ဒရယ်အစိုးရ - စီးပွားရေးရေးရာနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန။ အမျိုးသားဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.pdf (ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀ တွင်ကြည့်ပါ) ။
၃။ သြစတြေးလျအစိုးရ။ သြစတြေးလျ၏အမျိုးသားဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် 3. https://www.industry.gov.au/data-and-publications/australias-national-hydrogen-strategy (၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ဝင်ရောက်) ။
၄။ အီးယူကော်မရှင်။ ရာသီဥတုကြားနေဥရောပအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_4_2020 (ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀ တွင်ကြည့်ပါ) ။
၅ ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏အနာဂတ်။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သော 5. https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen (ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်) ။
၆ ။ Bloomberg - ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အပိုင်းသုံးပိုင်းတွဲ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://www.bloomberg.com/graphics/6-opinion-hydrogen-green-energy-revolution-challenges-risks-advantages/oil.html (၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင်ဝင်ရောက်) ။
7. Rifkin, ဂျေအဆိုပါဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေး; Tarcher-Putnam: နယူးယောက်၊ နယူးယော့၊ အမေရိကန်၊ ၂၀၀၂ ။ [Google Scholar]
၈ ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်: ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အမြင်။ 8. အွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Hydrogen_2019.pdf (ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက် 2019 တွင်ဝင်ရောက်) ။
9. Newborough, M ။ ; Cooley, G. ကမ္ဘာ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဈေးကွက်တွင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ - ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရောင်များ၏ရောင်စဉ်။ လောင်စာဆဲလ် Bull ။ 2020, 2020, 16-22 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
၁၀။ အိုင်ဗင်နင်ကို၊ အေအနာဂတ်ကိုစွမ်းအားပေးနိုင်သည့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရောင်များကိုကြည့်ပါ။ Forbes မဂ္ဂဇင်း။ အွန်လိုင်းမှရရှိနိုင်ပါသည်။ https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/10/2020/2020/a-look-at-the-colors-of-hydrogen-that-could-power-our-future/ sh = 08edf31d3e9e6 (ဒီဇင်ဘာလ ၃၀၊ ၂၀၀ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်) ။
11. Scita, R ကို။ ; Raimondi, PP; Noussan, အမ်အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ အနာဂတ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေး၏နည်းပညာနှင့်ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညစ်ညမ်းမှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ FEEM Nota di Lavoro; Fondazione Eni Enrico Mattei: မီလန်၊ အီတလီ၊ ၂၀၂၀; Volume 2020 [Google Scholar]
12. ဗန်က de Graaf, T က။ ; ကုန်းတွင်းပိုင်း၊ Scholten, D ။ ; Westphal, K. အသစ်သောရေနံ? ပထဝီနိုင်ငံရေးနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏နိုင်ငံတကာအုပ်ချုပ်မှု။ စွမ်းအင် Res ။ Soc ။ သိပ္ပံ 2020, 70, 101667. [Google Scholar] [CrossRef]
၁၃။ ဒစ်ကယ်၊ အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ပြုစေသည့် R. Blue Hydrogen: ဂျာမနီ၏ဖြစ်ရပ်၊ OIES စာတမ်း၊ စွမ်းအင်လေ့လာမှုများအတွက်အောက်စ်ဖို့ဒ်အင်စတီကျု - အောက်စ်ဖို့ဒ်၊ ယူကေ၊ ၂၀၂၀ ။ [Google Scholar]
14. BloombergNEF ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေးအလားအလာ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://data.bloomberglp.com/professional/sites/2020/BNEF-Hydrogen-Economy-Outlook-Key-Messages-24-Mar-30.pdf (ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၁၂ တွင်ဝင်ရောက်) ။
15. El-Emam, RS; အိုဇန်ဟမ်။ ; Zamfirescu, C ။ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ သန့်ရှင်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အပူဓာတုသံသရာအကြောင်း။ ဂျေသန့်ရှင်းသည်။ Prod ။ 2020, 262, 121424. [Google Scholar] [CrossRef]
16. Pinsky, R ကို။ ; Sabharwall, P ။ ; Hartvigsen, J ။ ; O'Brien ဂျေ၊ နျူကလီးယားစပ်ဟိုက်ဘရစ်စွမ်းအင်စနစ်အတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်။ Prog ။ Nucl စွမ်းအင် 2020, 123, 103317. [Google Scholar] [CrossRef]
17. Ping, Z ကို။ ; Laijun, W ။ ; Songzhe, C ။ ; Jingming, X. တရုတ်နိုင်ငံရှိအိုင်အိုဒင်း - ဆာလဖာလုပ်ငန်းစဉ်မှနျူကလီးယားဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်မှု။ သက်တမ်းတိုး။ ရေရှည်တည်တံ့။ စွမ်းအင်ဗျာ 2018, 81, 1802-1812 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
18. Zhiznin, S ကို။ ; တီနိုဟော့ဗ်။ ; Gusev, ကမ္ဘာနှင့်ရုရှားအတွက်နျူကလီးယားနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်၏စီးပွားရေးရှုထောင့်။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2020, 45, 31353-31366 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
19. Bhandari, R ကို။ ; Trudewind, CA; Zapp, P. electrolysis မှတဆင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု၏ P. Life cycle cycle ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ဂျေသန့်ရှင်းသည်။ Prod ။ 2014, 85, 151-163 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
၂၀ ။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မှဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်နည်းပညာအလားအလာ။ 20. အွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Sep/IRENA_Hydrogen_from_renewable_power_2018.pdf (ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် ၂၀၁၀ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်) ။
၂၁ ။ ၂၀၁၄-၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်နှစ်စဉ်ဂလိုဘယ်လျှပ်စစ်ဓာတ်ရိုက်နိုင်မှုစွမ်းအားစတင်လည်ပတ်လာသည်။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-electrolysis-capacity-becoming-operational-annually-21-2014-historical-and-announced ) ။
၂၂ သောမတ်စ်၊ Ren ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရှိသောဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ စက်မှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္Sများအကြားပျောက်ဆုံးနေသောချိတ်ဆက်မှု။ အွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်သော 22. https://hydrogeneurope.eu/sites/default/files/2018-2018/06-2018_Hydrogenics_Company%06presentation.compressed.pdf (ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် 20 တွင်ဝင်ရောက်) ။
23. Al-Qahtani, A ။ ; ပါကင်ဆန်၊ ခ။ ; Hellgardt K ။ ; Shah, N ။ ; Guillen-Gosalbez, G. အသက်တာသံသရာကို သုံး၍ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်း၏အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖော်ထုတ်။ Appl ။ စွမ်းအင် 2021, 281, 115958. [Google Scholar] [CrossRef]
24. d'Amore Domenech, R ကို။ ; စန်တီယာဂို၊ Leo, TJ ပင်လယ်ရေတွင်စိမ်းလန်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပင်လယ်ရေ Electrolysis နည်းပညာများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ သက်တမ်းတိုး။ ရေရှည်တည်တံ့။ စွမ်းအင်ဗျာ ၂၀၂၀၊ ၁၃၃၊ ၁၁၀၁၆၆ [Google Scholar] [CrossRef]
25. ကလိုး, S ကို။ ; Ruhnau အို။ ; Hirth, L. ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေးတွင်အရင်းအနှီးအသုံးချခြင်း - ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲကြွယ်ဝသောစွမ်းအင်စနစ်များတွင်ပျင်းရိမှုစွမ်းရည်ကိုလျှော့ချရန်ရှာပုံတော်။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2020, 46, 169-188 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
26. Rabiee, တစ် ဦး က။ ; ကိန်း, A ။ ; Soroudi, A. အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအသုံးပြုရန်နည်းပညာအတားအဆီးများ - စွမ်းအင်စနစ်ရှုထောင့်။ သက်တမ်းတိုး။ စွမ်းအင် 2021, 163, 1580-1587 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
27. Proost, J. အစိမ်းရောင် electrolytic ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကွာခြားမှုနှုန်းများအတွက်လိုအပ်သောထုတ်လုပ်မှုစကေး၏ဂျေဝေဖန်အကဲဖြတ်။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2020, 45, 17067-17075 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
28. Armijo, J ကို။ ; Philibert, C. နေရောင်နှင့်လေစွမ်းအင်အမျိုးမျိုးမှအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အမိုးနီးယားထုတ်လုပ်မှုကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုတ်လုပ်ခြင်း - ချီလီနှင့်အာဂျင်တီးနား၏ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2020, 45, 1541-1558 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
၂၉ ။ စကေးမှာကာဗွန်အနိမ့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများ။ 29. အွန်လိုင်းရရှိနိုင်: https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/hydrogen-production/energy-briefing-green-hydrogen.pdf (ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ဝင်ရောက်) ။
30. CertifHy ။ CertifHy-SD ဟိုက်ဒရိုဂျင်လိုအပ်ချက်။ 2019. အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်: https://www.certifhy.eu/images/media/files/CertifHy_2_deliverables/CertifHy_H2-criteria-definition_V1-1_2019-03-13_clean_endorsed.pdf (ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ 18 တွင်ဝင်ရောက်) ။
31. Philibert, C. Methane Splitting and Turquoise Amonia ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://www.ammoniaenergy.org/articles/methane-splitting-and-turquoise-ammonia/ (ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် ၂၀၁၀ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်) ။
၃၂။ လောင်စာဆဲလ်များသတင်းလွှာ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကွန်ယက်များတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုရောစပ်ခြင်း၊ လောင်စာဆဲလ် Bull ။ ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၀၊ ၁၀။ [Google Scholar] [CrossRef]
33. Pellegrini, M ကို။ ; ဂူဇီနီ၊ Saccani, C. အီတလီသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကွန်ယက်တွင်ရာခိုင်နှုန်းနည်းသောအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရောစပ်ခြင်း၏အလားအလာကိုကြိုတင်အကဲဖြတ်ခြင်း။ စွမ်းအင် 2020, 13, 5570. [Google Scholar] [CrossRef]
34. Ekhtiari, A ။ ; Flynn, D ကို။ ; ဆီးရွန်၊ ကန့်သတ်ထားသောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မှအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို Multi-Point Injection ကိုဓာတ်ငွေ့ကွန်ယက်တစ်ခုသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ စွမ်းအင် 2020, 13, 6047. [Google Scholar] [CrossRef]
35. Cerniauskas, S ။ ; ဟိုဆေးချားဗေ့စ်ဂျွန်ကို၊ Grube, T ။ ; ရော်ဘင်နီးယပ်စ်၊ Stolten, hydrogen ဟိုက်ဒရိုဂျင်အတွက်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းပြန်လည်နေရာချထားခြင်းရွေးချယ်စရာများ - ဂျာမနီနိုင်ငံ၏လေ့လာမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2020, 45, 12095-12107 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
36. ငုယင်၊ TT; ပန်းခြံ, JS; ကင်မ် WS; Nahm, SH; Beak, UB ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပိုက်လိုင်းသံမဏိ X70 ကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်မှီခိုမှုသည်အမျိုးမျိုးသောဓာတ်ငွေ့အရောအနှောအခြေအနေများတွင် in situ သေးငယ်သည့်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သည်။ Mater ။ သိပ္ပံ Eng ။ တစ် ဦး က 2020, 781, 139114. [Google Scholar] [CrossRef]
37. Wulf, C ။ ; ရေဂျီ၊ Grube, T ။ ; Zapp, P ။ ; ရော်ဘင်နီးယပ်စ်၊ Hake, JF; Stolten, Life ဟိုက်ဒရိုဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးရန်ရွေးချယ်မှုများ၏ဘဝသံသရာအကဲဖြတ်ခြင်း။ ဂျေသန့်ရှင်းသည်။ Prod ။ 2018, 199, 431-443 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
38. Ishimoto, Y ကို။ ; Voldsund, M ။ ; နစ်စေး၊ Roussanaly, S ။ ; Berstad, D ။ ; Gardarsdottir, SO နော်ဝေမှဥရောပနှင့်ဂျပန်သို့အကြီးစားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း။ တန်ဖိုးကွင်းဆက်အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အရည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အမိုးနီးယားတို့ကိုစွမ်းအင်သယ်ဆောင်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2020, 45, 32865-32883 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
သြစတြေးလျရှိလေနှင့်နေစွမ်းအင်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ကျောက်မီးသွေးတင်ပို့ရန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်း။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 39, 2020, 45-3899 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
40 Gallardo, FI; Monforti Ferrario, A ။ ; Lamagna, M ။ ; Bocci, E ။ ; Astiaso Garcia က, D ။ ; Baeza-Jeria, TE ချီလီနိုင်ငံ၏မြောက်ဘက်တွင်လျှပ်စစ်ဓါတ်ဖြင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖြင့်နေရောင်ခြည်သုံးဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု၏နည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် Atacama သဲကန္တာရမှဂျပန်သို့တင်ပို့ခြင်းကိစ္စ။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စာနယ်ဇင်းအတွက်စွမ်းအင် 2020 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
41 Heuser, pm တွင်; Ryberg, DS; Grube, T ။ ; ရော်ဘင်နီးယပ်စ်၊ Stolten, D. နည်းပညာပါသောစီးပွားရေးဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစွမ်းအင်ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းနှင့် Patagonia နှင့် Japan တို့အကြား CO2 ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအခြေခံသည်။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2019, 44, 12733-12747 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
42 Ash ကို, N ကို။ ; Scarrough, T. Solar on Sailing: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အစိမ်းရောင်အမိုးနီးယားကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သလား။ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးရန်ပုံငွေ - လန်ဒန်၊ ဗြိတိန်၊ ၂၀၁၉။ [Google Scholar]
43 Miyaoka, H ။ ; Miyaoka, H ။ ; အီချီကာဝါ၊ တီ။ ; အီချီကာဝါ၊ တီ။ ; Kojima, Y. PEM လောင်စာဆဲလ်အတွက်အမိုးနီးယားမှဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုမြင့်မားစွာသန့်စင်ပေးခဲ့သည်။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2018, 43, 14486-14492 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
44 Reuß, M ။ ; Grube, T ။ ; ရော်ဘင်နီးယပ်စ်၊ Stolten, D. Spatial resolution နှင့်အတူတစ် ဦး ကဟိုက်ဒရိုဂျင်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်: ဂျာမနီရှိအခြေခံအဆောက်အအုံနည်းပညာနှိုင်းယှဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Appl ။ စွမ်းအင် 2019, 247, 438-453 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
45. Tlili, အို။ ; Mansilla, C ။ ; ပိတ်ချော, J ။ ; ရေဂျီ၊ Grube, T ။ ; ရော်ဘင်နီးယပ်စ်၊ အန်ဒရီဂျေ။ ; ဖာရက်၊ လီ Duigou, A ။ ; Stolten, France ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်အသင့်တော်ဆုံးထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကိုဖော်ထုတ်ရန် Geospatial modeling ။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2020, 45, 3053-3072 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
46. ​​Lahnaoui, A ။ ; ဝုလ်၊ Heinrich, H ။ ; Dalmazzone, D. ဖိအားများသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်တင်ကားများမှတဆင့်ရွေ့လျားနိုင်မှုအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအကောင်းဆုံး။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2019, 44, 19302-19312 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
47. Moradi, R ကို။ ; Groth, KM ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်း - အနုပညာနည်းပညာများ၏အခြေအနေကိုသုံးသပ်ခြင်း၊ စွန့်စားရမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဆန်းစစ်ခြင်း။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2019, 44, 12254-12269 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
48. Bracha, M ။ ; Lorenz, G ။ ; Patzelt, A ။ ; Wanner, ဂျာမနီရှိအမ်အကြီးစားဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 1994, 19, 53-59 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
49. Wijayanta, AT; အိုဒါတီ .; Purnomo, CW; Kashiwagi, T ။ ; အလားအလာရှိသောဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုအဖြစ်အဇဇ်၊ အမ်အရည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2019, 44, 15026-15044 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
50. Aakko-Saksa, PT; ကွတ်, C ။ ; ကီဗီယာဟို၊ Repo, T. အရည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်ရန်အတွက်အရည်အော်ဂဲနစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သယ်ဆောင်သူများ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း။ ဂျေပါဝါသတင်းရင်းမြစ် 2018, 396, 803-823 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
စပိန်နိုင်ငံတွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြန့်ကျက်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ရာသီအလိုက်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်အနေဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို 51. Brey, J. အသုံးပြုခြင်း။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စာနယ်ဇင်းအတွက်စွမ်းအင် 2030 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
52 Reuß, M ။ ; Grube, T ။ ; ရော်ဘင်နီးယပ်စ်၊ Preuster, P ။ ; Wasserscheid, P ။ ; Stolten, Season ရာသီအလိုက်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်အခြားသယ်ဆောင်သူများ - ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဟိုက်ဒရိုဂျင်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပုံစံ။ Appl ။ စွမ်းအင် 2017, 200, 290-302 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
53 Zivar, D ကို။ ; Kumar, S ။ ; Foroozesh, J. မြေအောက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှု - ပြည့်စုံသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စာနယ်ဇင်းအတွက်စွမ်းအင် 2020 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
54 Caglayan, DG; Weber N ။ ; Heinrich, HU; လင်းလင်းဂျေ။ ; ရော်ဘင်နီးယပ်စ်၊ Kukla, PA; Stolten, Europe ဥရောပရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်ရန်ဆားဂိတ်များ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအလားအလာ။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2020, 45, 6793-6805 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ပိုလန်နိုင်ငံရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုအတွက်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာမြေအောက်ရေကိုအသုံးပြုခြင်း၏ ၅၅. တာကော့စကီ၊ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 55, 2017, 42-347 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
56 Bai, M ။ ; သီချင်း K သည်။ ; နေ၊ ယ။ ; သူ၊ M; လီ, Y ။ ; Sun, J. တရုတ်နိုင်ငံရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်မြေအောက်သိုလှောင်မှုနည်းပညာနှင့်အလားအလာများခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ဂျေအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်။ သိပ္ပံ Eng ။ 2014, 124, 132-136 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
57. Lemieux, A ။ ; Shkarupin, A ။ ; ကနေဒါရှိမြေအောက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှု၏ Sharp၊ K. ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေ။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2020, 45, 32243-32259 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
58. Hirscher, M ကို။ ; Yartys, VA; Baricco, M ။ ; Bellosta ဗွန် Colbe, J ကို။ ; Blanchard, D ။ ; Bowman, RC; Broom, DP; Buckley, CE; Chang, F ။ ; ချင်ချန် et al ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အခြေပြုစွမ်းအင်သိုလှောင်ရန်ပစ္စည်းများ - အတိတ်၊ မကြာသေးမီကတိုးတက်မှုများနှင့်အနာဂတ်အလားအလာများ။ ဂျေအလွိုင်း။ Compd ။ 2020, 827, 153548. [Google Scholar] [CrossRef]
59. Crow, JM ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုသည်အမှန်ဖြစ်လာသည်။ ဓာတုဗေဒကမ္ဘာ့ဖလား။ 2019. အွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်: https://www.chemistryworld.com/features/hydrogen-storage-gets-real/3010794.article (ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ဝင်ရောက်) ။
Hybrid Solar Project မှ Solid-State အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အတွက် 60. Collins, L. World ပထမ။ ၂၀၂၀. အွန်လိုင်းရရှိနိုင်: https://www.rechargenews.com/transition/world-first-for-solid-state-green-hydrogen-at-hybrid-solar-project/2020-2-1 (ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် 771319 တွင်ကြည့်ရှု) ) ။
61 Plug ပါဝါ။ ပစ္စည်းကိုင်တွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်လောင်စာဆဲလ်ထုတ်ကုန်များ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သော ၂၀၂၀ ။ https://www.plugpower.com/fuel-cell-power/gendrive/ (၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင်ဝင်ရောက်) ။
62 Kakoulaki, G ။ ; Kougias ငါ။ ; တေလာ N ။ ; Dolci, F ။ ; Moya ဂျေ။ ; Jäger-Waldau၊ ဥရောပမှအေအစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင် - ဒေသတွင်းဆန်းစစ်ချက် - လက်ရှိထုတ်လုပ်မှုကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဖြင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြင့်အစားထိုးခြင်း။ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှု။ Manag ။ စာနယ်ဇင်းအတွက် 2020, 113649 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
63 Bhaskar, တစ် ဦး က။ ; အက်ဒီဒီဒီ၊ Nikpey Somehsaraei၊ အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြင့်သံရိုင်းကိုတိုက်ရိုက်လျှော့ချခြင်းဖြင့်သံနှင့်သံမဏိလုပ်ငန်းကို H. dearbonization ။ စွမ်းအင် 2020, 13, 758. [Google Scholar] [CrossRef]
၆၄ ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် Global EV Outlook 64. ၂၀၂၀ ။ https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020 (ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် ၂၀၂၀ တွင်ဝင်ရောက်) ။
၆၄ ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် Global EV Outlook 65. ၂၀၂၀ ။ https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2019 (ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် ၂၀၂၀ တွင်ဝင်ရောက်) ။
66. TCP, IA 2019 လောင်စာဆဲလ်ယာဉ်အရေအတွက်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆီဖြည့်သည့်နေရာများနှင့်ပစ်မှတ်အရေအတွက်စစ်တမ်း။ 2019. အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်: https://www.ieafuelcell.com/fileadmin/publications/2019-04_AFC_TCP_survey_status_FCEV_2018.pdf (ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် 10 တွင်ဝင်ရောက်) ။
67. Wanitschke, A ။ ; Hoffmann, S. အနာဂတ်မှာဘက်ထရီလျှပ်စစ်ယာဉ်များလား။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်များနှင့်မရေရာမှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ ပတ်ဝန်းကျင်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု။ Soc ။ အကူးအပြောင်း။ 2020, 35, 509-523 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
68 FuelCellsWorks ။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အဆုံးတွင်ပါရီ၌ 600 HYPE ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့တက္ကစီကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းရှိနိုင် the-end-of-2020 / (၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်) ။
ပါရီရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်သုံးအငှားယာဉ်များအတွက် 69. Hall, M. Plan ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://www.pv-magazine.com/50,000/2020/2020/plans-for-11-hydrogen-powered-taxis-in-paris/ (ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် ၂၀၁၀ တွင်ကြည့်ပါ) ။
70 Bae, S ကို။ ; လီ, အီး။ ; ဟန်, မြို့ပြဒေသများရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်ယာဉ်များကိုဆီဖြည့်ရန်ဟိုက်ဒြိုဂျင်ထောက်ပံ့ရေးကွန်ယက်ကိုဂျီမျိုးစုံစီမံကိန်း။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီးနိုင်သော ၂၀၂၀၊ ၁၂၊ ၄၁၁၄ [Google Scholar] [CrossRef]
71Grüger, F ။ ; Dylewski, L ။ ; ရော်ဘင်နီးယပ်စ်၊ Stolten, fuel ။ လောင်စာဆဲလ်သုံးယာဉ်များနှင့်ကားမောင်းခြင်း - ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆီဖြည့်သည့်စခန်းများကိုဆီဖြည့်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ Appl ။ စွမ်းအင် 2018, 228, 1540-1549 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
72. Lee က, DY; Elgowainy, A ။ ; ကော့ဇ်၊ Vijayagopal, R ကို။ ; Marcinkoski၊ ဂျင်ဘဝနှင့်ဆိုင်သောသက်ရောက်မှုများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာ၏အလယ်အလတ်နှင့်လေးလံသောထရပ်ကားများ။ ဂျေပါဝါသတင်းရင်းမြစ် 2018, 393, 217-229 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
73. အယ်လ် Hannach, M ကို။ ; Ahmadi, P ။ ; ဂူဇန်မန်း။ ; Pickup, S ။ ; Kjeang၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်ဒီဇယ်ဆီ - လောင်စာဆီနှစ်မျိုးခွဲအလေးချိန်လေးလံသောထရပ်ကားများ၏ဘဝအသက်တာအကဲဖြတ်ချက်။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 8, 2019, 44-8575 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
74 Mulholland, E ။ ; တီတာဂျေ။ ; Cazzola, P ။ ; မက်ဒေါ်နယ်, Z ကို။ ; ach Gallachóir, BP လမ်းမကြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုကာဗွန်နစ်အားဖြစ်စေသည့်ကာလရှည်ခရီး - ၂၀၅၀ အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်။ Appl ။ စွမ်းအင် 2050, 2018, 216-678 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
75. Connolly, D. လျှပ်စစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံအားလုံးအတွက်ရေနံနှင့်ဘက်ထရီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျှပ်စစ်လမ်းများ၏စီးပွားရေးရှင်သန်နိုင်စွမ်း။ စွမ်းအင်မဟာဗျူဟာဗျာ 2017, 18, 235-249 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
76. လောင်စာဆီဆဲလ်များ။ ASKO သည် Scania ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်လျှပ်စစ်ထရပ်ကားလေးစင်းကိုနော်ဝေတွင်အသုံးပြုသည်။ လောင်စာဆဲလ် Bull ။ ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၀၊ ၁။ [Google Scholar] [CrossRef]
77. လောင်စာဆီဆဲလ်များ။ H2-Share သည်နယ်သာလန်၌ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်သုံးထရပ်ကားအားသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လောင်စာဆဲလ် Bull ။ ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၀၊ ၄။ [Google Scholar] [CrossRef]
78. လောင်စာဆဲလ်များသတင်းလွှာ။ Clean Logistics JV သည်ဒီဇယ်ထရပ်ကားများကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ဟိုက်ဘရစ်အဖြစ်ပြောင်းပေးသည်။ လောင်စာဆဲလ် Bull ။ 2019, 2019, 4-5 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
79. လောင်စာဆဲလ်များသတင်းလွှာ။ Air Liquide, Rotterdam သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကုန်တင်ကားများနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုချိတ်ဆက်ပေးသည်။ လောင်စာဆဲလ် Bull ။ ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၀၊ ၄။ [Google Scholar] [CrossRef]
80 လာအို, J ကို။ ; သီချင်း H; ။ ဝမ်စီ။ ; Zhou, Y ။ ; ဝမ်၊ ဂျေတရုတ်နိုင်ငံ၊ ပေကျင်း - တီကျင်း - ဟီဘက် - ရှန်ဒေါင်းဒေသတွင်လေထုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောထရပ်ကားများမှဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများကိုဒီဇယ်ကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြင့်အစားထိုးခြင်း။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2020. [Google Scholar] [CrossRef]
81 Kast, J ကို။ ; Morrison, G ။ ; Gangloff, JJ; Vijayagopal, R ကို။ ; Marcinkoski, ဂျ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်လျှပ်စစ်ကုန်တင်ကားအမျိုးမျိုးကိုအလယ်အလတ်နှင့်လေးလံသောစျေးကွက်တွင်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ Res ။ Transp ။ Econ ။ 2018, 70, 139-147 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
82. Tyrol, HS CHIC စီမံကိန်း။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://www.h2020-suedtirol.com/en/projects/chic/ (ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ ၂၀ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်) ။
83 Loría, LE; Watson, V ။ ; ကိစတို။ ; Phimister, E. နိမ့်ထုတ်လွှတ်မှုဘတ်စ်ကားများအတွက်အသုံးပြုသူများ၏အကြိုက်များကိုလေ့လာခြင်း - ဥရောပ၏အကြီးမားဆုံးဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘတ်စ်ကားအုပ်စု၏အတွေ့အကြုံများ။ ဂျေရွေးချယ်မှုမော်ဒယ်။ 2019, 32, 100169. [Google Scholar] [CrossRef]
84. Hua, T ။ ; Ahluwalia, R ။ ; Eudy, L ။ ; အဆိုတော်, G ။ ; ဂျermer, B ။ ; Asselin-Miller, N ကို။ ; ဗီဆဲလ်၊ ပက်တာစင်, T ။ ; Marcinkoski, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများ၏ဂျေအခြေအနေ။ ဂျေပါဝါသတင်းရင်းမြစ် 2014, 269, 975-993 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
85 Lozanovski, A ။ ; ဝှိုက်ခ်ဟတ်၊ ကိုကို, N ။ ; အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်လောင်စာဆဲလ်ဘတ်စ်ကားများ၏ Whitehouse, အက်စ်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအကဲဖြတ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီးနိုင်မှု ၂၀၁၈၊ ၁၀၊ ၁၄၈၀ ။ [Google Scholar] [CrossRef]
86 Lee က, DY; Elgowainy, A ။ ; Vijayagopal, R. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများအတွက်လောင်စာစီးပွားရေး၏ပစ်မှတ်များပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရောက်မှုများ။ စွမ်းအင်မူဝါဒ 2019, 128, 565-583 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
87. Piraino, F ကို။ ; ဂျီနိုဗာစ်၊ Fragiacomo, P. ဒေသတွင်းရထားများနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်ရွေ့လျားမှုသဘောတရားသစ်ဆီသို့။ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှု။ Manag ။ 2020, စာနယ်ဇင်းအတွက်ဆောင်းပါး, 113650. [Google Scholar] [CrossRef]
88. လောင်စာဆဲလ်များသတင်းလွှာ။ Hesse ခရီးသည်တင်ရထားများအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘူတာရုံ။ လောင်စာဆဲလ် Bull ။ ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၀၊ ၉။ [Google Scholar] [CrossRef]
89. လောင်စာဆဲလ်များသတင်းလွှာ။ Alstom, Eversholt မီးရထားသည် Breeze ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရထားကိုနောက်ထပ်ပေါင် ၁ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ လောင်စာဆဲလ် Bull ။ ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၀၊ ၅။ [Google Scholar] [CrossRef]
90. လောင်စာဆဲလ်များသတင်းလွှာ။ Alstom, Snam သည်အီတလီတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရထားများထုတ်လုပ်သည်။ လောင်စာဆဲလ် Bull ။ ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၀၊ ၄။ [Google Scholar]
91 Bicer, Y ကို။ ; Dincer, I. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုအမျိုးအစားများဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အမိုးနီးယားမောင်းနှင်သည့်ရေကြောင်းဆိုင်ရာရေယာဉ်များ - နှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်ခြင်း။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2018, 43, 4583-4596 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
92. Baroutaji, A ။ ; Wilberforce T ။ ; ရာမဒန်၊ Olabi, AG လေကြောင်းနှင့်အာကာသကဏ္inများရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်လောင်စာဆဲလ်နည်းပညာကိုဘက်စုံလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း။ သက်တမ်းတိုး။ ရေရှည်တည်တံ့။ စွမ်းအင်ဗျာ 2019, 106, 31-40 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
93. အဲယားဘတ်စ်။ အဲယားဘတ်စ် ZEROe စီမံကိန်း။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://www.airbus.com/newsroom/stories/these-new-Airbus-concept-aircraft-have-one-thing-in-common.html (ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်၊ ၂၀၂ တွင်ကြည့်ပါ) ။
94. Lo Basso, G ။ ; Nastasi, B ။ ; Astiaso Garcia က, D ။ ; Cumo, F. ဓာတုဗေဒနှင့် condensing ဘွိုင်လာများ၏ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကြွယ်ဝသောသဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောစပ်မှုများကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းထိရောက်မှုတိုင်းတာခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း။ စွမ်းအင် 2017, 123, 615-636 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
95 Schiro, F ကို။ ; Stoppato, A ။ ; Benato, အေ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကြွယ်ဝသောသဘာဝဓာတ်ငွေ့၏သက်ရောက်မှုကိုဒီဇိုင်းနှင့်အညီတွက်ချက်ရာတွင်ပြည်တွင်းဓာတ်ငွေ့ဘွိုင်လာများအပေါ်ဆန်းစစ်ခြင်း။ ကာဗွန်အရင်းအမြစ်။ Convers ။ 2020, 3, 122-129 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
96. Wahl, J ကို။ ; Kallo, J. ဥရောပဓာတ်ငွေ့ဇယားများတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုရောစပ်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသောထွင်းဖောက်ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်များလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်အပေါ်သက်ရောက်မှု။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2020, 45, 32534-32546 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
97. Meziane, S ။ ; Bentebbiche, အေ။ ရောစပ်ထားသောလောင်စာလောင်စာသဘာဝဓာတ်ငွေ့ - ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုမိုက်ခရိုဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်၏ကြွယ်ဝသော / လွင့်မျောမှု / ပိန်သောလောင်ကျွမ်းခြင်း၏နံပါတ်လေ့လာမှု။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2019, 44, 15610-15621 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
98. H21 ။ H21 စီမံကိန်း။ 2016. အွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်: https://www.h21.green/ (ဒီဇင်ဘာလ 6, 2020 တွင်ဝင်ရောက်) ။
99. Hy4Heat ။ Hy4Heat စီမံကိန်း။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၁၈၈၈ https://www.hy2018heat.info/ (ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ဝင်ရောက်) ။
100. Worcester-Bosch ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်ကျွမ်းသောဘွိုင်လာ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀: https://www.worcester-bosch.co.uk/hydrogen (ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်)
101. SNG ။ H100 Fife စီမံကိန်း။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀: https://www.sgn.co.uk/H2020Fife (ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်)
102. Taanman, M ကို။ ; က de Groot, A ။ ; ကမ်ပ်၊ R ။ ; Verspagen, နယ်သာလန်၌ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအသုံးပြု။ micro Cogeneration များအတွက်ပျံ့နှံ့လမ်းကြောင်း။ ဂျေသန့်ရှင်းသည်။ Prod ။ 2008, 16, S124-S132 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
103. Lokar, J ကို။ ; Virtič, P. လူနေအိမ်အဆောက်အ ဦး များ၌ photovoltaic နှင့်ဘက်ထရီသိုလှောင်သည့်စနစ်များနှင့်ပြည့်စုံသောစွမ်းအင်ဖူလုံရေးအတွက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုပေါင်းစပ်ရန်အလားအလာရှိသည်။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2020, 45, 34566-34578 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
104. McPherson, M ကို။ ; ဂျွန်ဆင်၊ Strubegger, M. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကာဗွန်နိမ့်စွမ်းအင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းပညာများ၏အခန်းကဏ္။ ။ Appl ။ စွမ်းအင် 2018, 216, 649-661 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
105. Ozawa, A ။ ; ကူဒို, Y ။ ; ကီတဂါဝါ၊ Muramatsu, R. ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်သယ်ဆောင်စက်များ အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းမှ CO2 ထုတ်လွှတ်မှု။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2019, 44, 11219-11232 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
106. Matsuo, Y ကို။ ; အဲန်ဒို၊ Nagatomi, Y ။ ; Shibata Y ကို။ ; Komiyama, R ။ ; Fujii, Y. ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုရောနှောမှုနှင့် CO2050 ကင်းစင်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်၏အခန်းကဏ္ofကိုအရေအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ စွမ်းအင် 2, 2018, 165-1200 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
107. Shulga, R ကို။ ; ပူတီလိုဗာ၊ စမီရာနိုဗာ၊ အိုင်ဗန်နိုဗာ၊ နိုက်ဒရိုဂျင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို အသုံးပြု၍ အန္တရာယ်ကင်းပြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမရှိသောနည်းပညာများ။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စွမ်းအင် 2020, 45, 34037-34047 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
108. Kafetzis, A ။ ; Ziogou, C ။ ; Panopoulos, K ။ ; Papadopoulou, S ။ ; Seferlis, P ။ ; Voutetakis, အက်စ်စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာများသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များ၊ ဘက်ထရီများနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်များပါ ၀ င်သည့်ကျွန်းအသေးစားအသေးစားများအတွက်ဟိုက်ဘရစ်အလိုအလျောက်အပေါ်အခြေခံသည်။ သက်တမ်းတိုး။ ရေရှည်တည်တံ့။ Energy Rev. 2020, 134, 110118. [Google Scholar] [CrossRef]
109. Kalamaras, E ။ ; Belekoukia, M ။ ; လင်း Z ကို။ ; Xu, B ။ ; ဝမ်၊ Xuan, J. ဝေးလံသောကျွန်းများရှိပေါင်းစပ်အပူနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် Hybrid Off-grid DC စနစ်၏နည်းပညာကိုစီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း။ စွမ်းအင် Procedia 2019, 158, 6315-6320 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
110. Gracia, L ။ ; Casero, P ။ ; Bourasseau, C ။ ; Chabert, A. Offid-Grid နေရာများတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ နည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း။ စွမ်းအင် 2018, 11, 3141. [Google Scholar] [CrossRef]
111. Pflugmann, F ကို။ ; Blasio, ND ပထဝီနိုင်ငံရေးနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏စျေးကွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အနိမ့်ကာဗွန်စွမ်းအင်ကမ်ဘာပျေါတှငျနယူးမှီခို။ သိပ္ပံနှင့်နိုင်ငံတကာရေးရာများအတွက်ဟားဗတ်ဘဲလ်ဖ်စင်တာ၊ အစီရင်ခံစာ၊ မတ်လ ၂၀၂၀ ။
112. Irina ။ အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင် - မူဝါဒချမှတ်ခြင်းအတွက်လမ်းညွှန်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အေဂျင်စီ၊ အဘူဒါဘီ၊ နို ၀ င်ဘာ ၂၀၂၀ ။ အွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်: https://www.irena.org/publications/2020/Nov/Green-hydrogen
113. Hikima, K သည်။ ; Tsujimoto, M ။ ; Takeuchi, M ။ ; Kajikawa, Y. ဂျပန်နိုင်ငံရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်သက်ဆိုင်သောနည်းပညာများအတွက်စီမံကိန်းများအတွက်ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီးနိုင်သော ၂၀၂၀၊ ၁၂၊ ၈၅၄၆. [Google Scholar] [CrossRef]
114. Meng, X ကို။ ; ဂူအေ၊ ဝူ X ကို။ ; Zhou, L ။ ; Zhou, J ။ ; လျူဘီ။ ; Mao, Z. တရုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်နိုင်ငံတကာနှိုင်းယှဉ်ခြင်း၌တရုတ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာ၏အခြေအနေပိုနေမြဲကျားနေမြဲ။ Int ။ ဂျေဟိုက်ဒရို။ စာနယ်ဇင်းအတွက်စွမ်းအင် 2020 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
115. SPGLOBAL ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်စွမ်းအင်အသွင်ပြောင်းမှုကိုမည်သို့လောင်စာပေးနိုင်သည် အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/2020-how-hydrogen-can-fuel-the-energy-transition-201119 (ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် ၂၀ တွင်ဝင်ရောက်) ။
116. ကန်၊ တောင်ကိုရီးယား၏ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းဗျူဟာနှင့်စက်မှုရှုထောင့်များ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/sichao_kan_hydrogen_korea_2020_2020.pdf (ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၁၀ တွင်ကြည့်ပါ) ။
117. Rystad စွမ်းအင်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်စစ်ပွဲများ - အစိုးရများသည်အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒြိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးရန်။ Rystad Energy: အော်စလို၊ နော်ဝေး၊ ၂၀၂၀ ။ [Google Scholar]
118. Hartley, PG; Au, V. သြစတြေးလျအတွက်အကြီးစားဟိုက်ဒရိုဂျင်စက်မှုလုပ်ငန်းဆီသို့။ အင်ဂျင်နီယာ 2020, 6, 1346-1348 ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ကောင်စီ၊ TA ။ ACWA Power - Air ထုတ်ကုန်များ gReen ဟိုက်ဒရိုဂျင် - ဆော်ဒီစွမ်းအင်မူဝါဒသစ်။ ၂၀၂၀. အတ္တလန္တိတ်ကောင်စီ၊ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်။ အွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-acwa-power-air-products-joint-venture-for-green-hydrogen-a-new- ဆော်ဒီ - စွမ်းအင် - မူဝါဒ / (ဒီဇင်ဘာလ 119 ရက်နေ့တွင်ဝင်ရောက်) ။
120. SPGLOBAL ။ ယူအေအီးသည်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်လှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီမံကိန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း - တရားဝင်။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/2020-uae-investing-in-green-and-blue-hydrogen-projects-as -part-of-clean-energy-move-official (ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်) ။
စမစ်၊ အမ်မော်ရိုကိုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိမ်းလန်းသောဟိုက်ဒရိုဂျင်အခန်းကဏ္forကိုရည်ရွယ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေးပညာရှင်။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://pemedianetwork.com/hydrogen-economist/articles/green-hydrogen/121/morocco-aims-for-global-green-hydrogen-role (၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ တွင်ကြည့်ပါ) ။
122. Ishikawa, Y. ရုရှားသည်အာရှသို့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအစိမ်းရောင်ပြောင်းလဲမှုဖြင့်တင်ပို့ရန်စီစဉ်နေသည်။ Asia Nikkei အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Russia-plans-to-export-hydrogen-to-Asia-in-green-shift#:~:text=Russia% 2020producs% 20hydrogen% 20now% 20for,% 20it% 20tenfold% 20by% 20 (202035 ဒီဇင်ဘာလ 18 ရက်နေ့တွင်ဝင်ရောက်) တိုးမြှင့်။
123. မဟာဗျူဟာ & ။ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကမ္ဘာကြီးတွင် GCC ၏ Edge ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း - အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏အရုဏ်။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://www.strategyand.pwc.com/m2020/en/reports/1/the-dawn-of-green-hydrogen/the-dawn-of-green-hydrogen.pdf (စာမျက်နှာ ၁၁ တွင်ကြည့်ရှုပါ) ဒီဇင်ဘာလ 2020) ။
124. ဥရောပဟိုက်ဒရိုဂျင်ကျောရိုးကျောရိုး။ ဥရောပဟိုက်ဒရိုဂျင်ကျောရိုး။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://gasforclimate2020.eu/sdm_downloads/european-hydrogen-backbone/ (ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၀ တွင်ဝင်ရောက်) ။
125. Frank, တစ် ဦး က။ ; Baratti, G. အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင် - မူဝါဒချမှတ်ခြင်းအတွက်လမ်းညွှန်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် S&P Global Platts၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်၊ ၂၀၂၀. အွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ -2020kg-production (၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်) ။
126. Ratcliffe, V. Saudi Arabia သည်အပြာရောင်အမိုးနီးယားကို Japan သို့ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးတင်ပို့သည်။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့် ၂၀၂၀ ။ https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-2020-09/saudi-arabia-sends-blue-ammonia-to-japan-in-world-first-shipment (၁၁ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်) ဒီဇင်ဘာလ 27) ။
127. Velazquez Abad, A ။ ; Dodds, PE အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်စရိုက်လက္ခဏာတွေအစပြု - အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်၊ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ဇာစ်မြစ်အာမခံချက်နှင့်စိန်ခေါ်မှုများ။ စွမ်းအင်ပေါ်လစီ ၂၀၂၀၊ ၁၃၈၊ ၁၁၁၃၀၀ ။ [Google Scholar] [CrossRef]
ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်း၏“ ညစ်ပတ်သုံးဆယ်” သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံကျော်လွန်သောကျောက်မီးသွေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်သည်
ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်းကိုကြည့်ပါက၎င်းသည်ငွေကြေးထောက်ပံ့သူဖြစ်ပြီးပဲရစ်သဘောတူညီချက်ပြီးနောက်ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှေးကွေးခြင်းမရှိပေ။ [... ]
လူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကဂျာကာတာကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြန်ဆုံး“ နစ်မြုပ်နေသောမြို့” ဖြစ်စေခဲ့သည်
ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်သည် * After-Sales Service Support After-Sales Service Support အကဲဖြတ် & တန်ဖိုး စီးပွားရေးအာမခံဝန်ဆောင်မှုများ မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ကန်ထရိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်း အရေးပေါ်ဝယ်ယူမှု စွမ်းအင်စာရင်းစစ် အင်ဂျင်နီယာ & ဒီဇိုင်း စိုက်ထူ & လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ မြန်ဆန် & စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး ပို့ကုန်သွင်းကုန်အထောက်အပံ့ ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာရေး Geo နည်းပညာလေ့လာမှုများ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအတည်ပြု ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူအင်အားဖြေရှင်းနည်းများ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတင်ဒါပါဝင်မှု စက်မှုဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ် စက်မှုပစ္စည်းဝယ်ယူရေး နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးရှိနေခြင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှု နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္Financeာရေးအကြံပေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး နိုင်ငံတကာစျေးကွက်သုတေသန နိုင်ငံတကာစျေးကွက်လည်ပတ်မှု နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးပြပွဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောင်းချသူမှတ်ပုံတင်ခြင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဥပဒေရေးရာနှင့်အခွန်အကြံပေး O&M၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း စီမံကိန်းကြောင့် - လုံ့လဝီရိယ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံ ဒေသဆိုင်ရာကုဒ်များ & စံချိန်စံညွှန်းများ အပိုပစ္စည်းများ၊ စမ်းသပ်ခြင်း & လက်မှတ် တတိယပါတီစစ်ဆေးခြင်း သင်တန်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများ Turnkey စီမံကိန်း Solutions တပတ်ရစ်စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ